Myanmar 18 Plus: “Let it snow, let it snow, let it snow …”
လွမ်းဝေတစ်ယောက် SilkAir ကောင်တာတွင် boarding pass ရလာမှပဲ သက်ပြင်းကို ဟင်းခနဲချနိုင်တော့သည်။ လက်ကလက်ပတ်နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ၇နာရီတောင် ကျော်နေပြီ။ မဖြစ်သေး ။ immigration ကို မြန်မြန်ဖြတ်ရမည်။ အဖေအတွက် duty free တွင် ဆေးတံသောက်ဆေးဝယ်ရဦးမည်။ တော်ကြာနေ အမေ့အတွက်တော့ ပါတိတ်တွေပါသွားပြီး အဖေအတွက် ဘာမှပါမလာလျှင် နှုတ်ခမ်းကြီးစူနေဦးမည်။ လွမ်းဝေသည် ကောင်တာက Airline staff ကောင်မလေး ပြန်ပေးလိုက်သည့် passport နှင့် boarding pass ကို ကိုင်ကာ နောက်လှည့်ထွက်လိုက်သည်။“အယ်..““ဆောရီးဗျာ ….““ရပါတယ် ရှင့် …“သူနှင့်
တိုက်မိမလို ဖြစ်သွားသည်က မိန်းမလှလေးတစ်ယောက်။ သူက အရင်တောင်းပန်လိုက်သည်။ သူမကြည့်ရာတာ သူ့လိုပင်နောက်ကျမှ ရောက်လာသည် ထင်သည်။ စိတ်အလျင်လိုနေတာ ဖြစ်ရမည်။ ဒါကြောင့်ပင် လွမ်းဝေက နောက်အဆုတ် သူမက
ကောင်တာကို အ၀င်တွင် တိုက်မိမလို ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ သူမကိုယ်တိုင်လဲ အားတုံ့အားနာသံနှင့် လွမ်းဝေကို ပြုံးကာပြနေရှာသည်။
ကောင်မလေးသည် လှတာတော့တော်တော်လှသည်။ သူမပါးစပ်က “ရပါတယ်ရှင့်“ လို့သာ ဗမာစကားကို ပီပီသသ
မထွက်လျှင် ဗမာလို့ထင်မိမည် မထင်။ စလုံးမ စတိုင်ပေါက်နေသည်။ ကြည့်ပါဦး။ ၀တ်ထားတာကိုက မြန်မာပြည် ပြန်မယ့်လူနှင့် မတူပင်။ ဒီက စလုံးမတွေ အပြင်ထွက်သည့် ပုံစံမျိုး။ ဒီဇိုင်းက ဟော့ရှော့ပင်။ အရင်ဆုံးသတိထားမိသည်က ပေါင်လည်လောက်တောင် မရှိသည့် ဂျင်းဘောင်းဘီတို။ မျက်စိကျစရာ ဖြူဖြူဝင်းဝင်း
ပေါင်တံသွယ်သွယ်လေးတွေက သွယ်သွယ်လျလျ ရှိနေသည်။ အပေါ်ဘက်ကို ကြည့်လိုက်တော့လဲ ပုခုံးသားဝင်းဝင်းလေး တစ်ဖက်ကို လှစ်ဟဖော်ပြထားသည့် ဘလောက်စ်အင်္ကျီကြောင့် အောက်ခံဘရာကြိုး သေးသေးလေးတောင် ပေါ်နေသည်။ ဒါက အခုခေတ် ဒီမှာ ရေပန်းစားနေသည့် ကြိုးပေါ် ပုခုံးပေါ် ဒီဇိုင်းပင်။ခေတ်ဆန်ဆန်
၀တ်ဆင်ထားသည့် ကောင်မလေးသည် မျက်နှာလေးက နုငယ်လွန်းလှသည်။ ဆံပင်နီညိုရောင်လေးက ပင်ကိုယ်အရောင် ဟုတ်မည် မထင်သော်လဲ ဖြူနုနေသည့် သူမနှင့်တော့ ပနံရစွာလိုက်ဖက်နေသည်။ ကြည့်ရတာ … မသကာ ရှိလှမှ နှစ်ဆယ်လောက်ပင် ရှိမလားမသိ။ လွမ်းဝေ နောက်ကို ကြည့်တော့ …အဖော်အပေါင်း မပါပဲ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ “အင်း … စလုံးမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ သူများလား မသိ “။ လွမ်းဝေသည် လှည့်ထွက်လာရင်း ခပ်လှမ်းလှမ်း အရောက်တွင် နောက်ပြန်တောင် လှည့်ကြည့်မိသည်။ သူမှ မဟုတ်။ ကောင်မလေး နောက်က တန်းစီနေသည်
့ဗိုက်ရွှဲရွှဲနှင့် အန်ကယ်ကြီး တစ်ယောက်ကလဲ သူမကို ငေးကြည့်နေသည်ဆိုတာကို တွေ့၍ ပြုံးတောင် ပြုံးမိသွားသည်။ တစ်ခုတော့ရှိသည်။ သူဒီလို ကောင်မလေးကို ငမ်းနေမိသောကြောင့် အရေးကြီးသည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတော့ သတိမထားမိလိုက်ပါ။လွမ်းဝေသည် နောက်ကျနေပြီမို့ တခါတည်း immigration
counter ကို ဖြတ်လိုက်သည်။ တော်သေးသည်။ သူက pass နှင့် အလုပ်လုပ်နေရသူဆိုတော့ သိပ်မစီလိုက်ရ။ ထုံးစံအတိုင်းပင်။ Changi Airport ကတော့ မနက်စောစောစီးစီး အချိန်ဖြစ်ပေမယ့် ခရီးသွားများနှင့် ပျားပန်းခတ်မျှကို စည်းကားနေသည်။ လွမ်းဝေသည် စိတ်ထဲတွင် “ဒီလောက် စည်နေသည့်
လေဆိပ်ကိုတောင် ထပ်ပြီးတော့ upgrading လုပ်ဦးမယ်ဆိုတော့ ဘုရား.. ဘုရား။ တော်ကြာနေ ခရီးသွားတွေများ ဒီထက်လာကြမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်းပြိုကျမှတောင် စိုးရိမ်ရသည်“ ဟု တွေးနေမိသည်။ဟုတ်လဲဟုတ်သည်။ ၂၀၀၇/၂၀၀၈ နောက်ပိုင်းမှ စ၍ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံက လူတွေသည် စလုံးကို ဘယ်လိုဘယ်လို ဓါတ်ကျသည်တော့ မသိ။ အလျှိလျှိကို ရောက်လာကြသည်မှာ မနည်းချေ။ ဒီထဲတွင် လွမ်းဝေတို့လို ရွှေမြန်မာတွေက ထိပ်ဆုံးကပင်။ အပျော်ပဲလား၊ အလည်လား၊ အလုပ်လား ..ဘာလား ညာလေးနှင့် တနေ့တနေ့ လာလိုက်ကြသည်မှာ.. MAI မပြောနှင့်.. SilkAir တောင် လေယာဉ် မပြည့်သည့်နေ့မရှိချေ။ အခုလဲ လွမ်းဝေတစ်ယောက် ဒီဇင်ဘာရောက်လို့ အလုပ်က ရှားရှားပါးပါး ခွင့်နှစ်ပတ်ကျော်ရလို့ မြန်မာပြည်
ပြန်မည်ဆိုတော့ လေယာဉ်က အချိန်ကောင်းတွေ မရှိတော့။ အခုလိုမျိုး သူများ မစီးချင်သည့် မနက်ပိုင်း အချိန်ကိုတောင် waiting လုပ်၍ စီးလာရသည်။ စဉ်းသာ စဉ်းစားကြည့်ပါတော့။သူ boaring gate ကို ရောက်သည့် အချိန်တွင် ခရီးသည်တွေတောင် တန်းစီကာ ၀င်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။ ကောင်တာမှာတုန်းက တိုက်မိမလို ဖြစ်သွားသည့် ကောင်မလေးကိုတောင် ရှာကြည့်သေးသည်။ မတွေ့။ ကြည့်ရတာ အထဲရောက်သွားပြီ ထင်သည်။ လွမ်းဝေသည် boaring pass ကိုကြည့်ကာ သူထိုင်ရမည့် နေရာသို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။ သူ့ထိုင်ခုံက 25F။ ဟော တွေ့ပါပြီ။ ခုနက ကောင်မလေးသည် လွမ်းဝေ၏ ရှေ့ထိုင်ခုံတွင် အခန့်သား ထိုင်နေသည်။ 24F…။ ပါလာသည့်
Handcarry အိတ်ကို အပေါ်တင်လိုက်ပြီးနောက် သူသည် ထိုင်ရမည့်နေရာသို့ တိုးဝင်လိုက်သည်။ အရင်ရောက်နေသည့် တရုတ်ဘိုးတော် လင်မယားစုံတွဲက ရှိနေသည်မို့ သူတို့ကို ရှောင်ကာ ကိုယ်ကို အရှေ့ဘက်သို့ နဲနဲကိုင်း၍ ၀င်လိုက်သည်။ မျက်စိကပါ အကျင့်ပါနေလို့လားတော့ မသိ။ အရှေ့က ထိုင်နေသည့် နီညိုရောင်လေးကို အလိုလို ငုံ့ကြည့်မိသွားဖြစ်သွားသည်။ ဟိုက်… တော်တော်လှတဲ့ ချိုင့်ဝှမ်းလေးပါလား။ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး တောင်ပူစာလေး နှစ်လုံးကြားတွင် ညီညီညာညာ ပြန့်ပြန့်ပြူးပြူး ဖြစ်နေသည်။ ဟိုက် ရှားပါး။ ကောင်မလေးသည် နောက်စေ့မှာ spycam များ တပ်ထားလားမသိ။ နောက်ကို ရုတ်တရက် လှည့်ကြည်သည်။ လွမ်းဝေသည် သူခိုးလူမိသလို ဖြစ်သွားသော်လဲ သွားလေးဖြီးကာ ရုပ်တည်နှင့် ပြုံးပြလိုက်သည်။ ကောင်မလေးသည် ချက်ချင်းပင် အရှေ့ကို မျက်နှာပြန်လှည့်သွားတာ တွေ့ရသည်။ဖြူလွလွ ဘော်ငွေရောင် တိမ်တိုက်တွေသည် လေယာဉ်၏ အောက်ဘက်တွင် အမျှင်တန်းများသဖွယ် တရိပ်ရိပ်ရွေ့လျားနေကြသည်။ လွမ်းဝေသည် လေယာဉ် ပြတင်းပေါက်မှနေ၍ အပြင်ကို မျှော်ကာငေးနေမိသည်။ အခုလိုခွင့်ရက်ရှည် ပြန်ရမှပင် သူသည် လွတ်လပ်ခြင်း၏ အရသာကို ခံစားရသည်။ ၂၀၁၂ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများနှင့် ကြိုဆိုရပေတော့မည်။ Marina Bay က ဘောလုံးတွေကို သွားငေးနေစရာ မလိုတော့ချေ။“Excuse Sir, snowtower for you”လွမ်းဝေသည်
လေယာဉ်မယ်လေး၏ အသံချိုချိုလေးကြောင့် အပြင်ဘက်ကို ငေးကြည့်နေရာမှ အတွင်းဘက်သို့ ပြန်လှည့်ကြည့်မိသည်။ အစိမ်းနုရောင် ၀တ်စုံလေးနှင့် SilkAir လေယာဉ်မယ် ချောချောလေးတစ်ယောက်က Wet tissue အလိပ်လေးကို ညှပ်လေးနှင့် ကိုင်ကာ သူ့ကို ကမ်းပေးနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကိုယ်ကလေးကို ခပ်ကိုင်းကိုင်းလုပ်ကာ လှမ်းပေးနေသည့်မို့ လေယာဉ်မယ်လေး၏ ရင်ဖုံးလိုလိုဝတ်စုံအောက်က ရွှေရင်လေးက မောက်မို့နေသည်ကို အကျင့်ပါနေသည့် မျက်လုံးက ကြည့်မိလျှက်သား ဖြစ်သည်။ ငွေရောင် ရင်ထိုးလေးပေါ်က နာမည်လေးကို ဖတ်မိတော့ “Cynthia Hua“ ဆိုပါလား။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါလား။ လွမ်းဝေ၏ စိတ်သည် မနှစ်က ဒီလိုအချိန်ကို Rewind မနှိပ်မိပဲ ပြန်ရောက်သွားတော့သည်။
မနှစ်ကတုန်းက လွမ်းဝေသည် ဒီအချိန်တွင် စလုံးမှာတောင် ရှိမနေ။ သူတို့ company က Project Initiation Meeting အတွက် Philippines က Manila မြို့ကို
ရောက်နေခဲ့သည်။ သူတစ်ယောက်တည်းတော့ မဟုတ်။ လွမ်းဝေရယ် သူ့စီနီယာ ဘိုးတော်ဖြစ်သူ Deputy Director ရယ် ဖြစ်သည်။ မနေ့ညက သူတို့ရောက်သည်။ ကုမ္ပဏီကပဲ အကြံအဖန်နှင့် တင်ပေးလိုက်တာလေးတော့ မသိ။ သူတို့လေယာဉ် အချိန်က တော်တော်မိုးချုပ်သည်။ HR က တရုတ်မက ကပ်စေးကုတ်သည့်နေရာတွင် နာမည်ကြီးဆိုတော့ ပြောလို့မရ။ သူတို့နှင့် အလုပ်လုပ်မည့် company က supervisor တစ်ယောက် လေဆိပ်တွင်လာကြိုသည်။ လွမ်းဝေသည် ဒီလောက်မိုးချုပ်သည့်
အချိန်တွင် လာကြိုသည်ဆိုတော့ ယောက်ျားလေးဖြစ်မည်လို့တောင် ထင်ထားသည်။ တကယ်တမ်းတွေ့တော့ မိန်းကလေးဖြစ်နေသည်။ မိတ်ဆက်ကျတော့ ကောင်မလေး နာမည်က “Cynthia” ရယ်။စလုံးမှာ နေဖူးသူတိုင်း ဖားမလေးတွေကို တွေ့ဖူးကြမည်သာ။ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ကောင်မလေးတော်တော်များများသည် မြန်မာမလေးတွေနှင့်တောင် ဆင်သေးသည်။ ကိုယ်ကသာ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်လျှင် အဆင်တော်တော်ပြေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်လဲ စလုံးက ကိုရွှေမြန်မာတွေ၏ ပါးစပ်တွင် ဖားရိုက်သည်ဆိုသည့် ဝေါဟာရသည် တွင်ကျယ်နေသည်သာ။ အခုလဲ အသားကလေး နဲနဲ ညိုသည်လို့ ထင်ရသည့် ဖားမချောချောလေး စင်သီယာကို မြင်တော့ လွမ်းဝေတစ်ယောက် မနီလာကို လာရကျိုးနပ်သည်ဟု တွေးမိသွားသည်။ ဖြစ်ချင်တော့..
အတူလာသည့် လွမ်းဝေ စီနီယာက ကားစီးတော့ ဘာစိတ်ကူးပေါက်သည် မသိ။ ရှေ့ခန်းက တက်စီးသွား၍ သူနှင့် စင်သီယာသည် နောက်ခန်းက လိုက်လာခဲ့ရသည်။ သဘောကောင်းသည့်
စီနီယာမို့ လွမ်းဝေအတွက် အကြံအဖန် လုပ်ပေးသွားတာလားတောင် မသိ။ လေဆိပ်ကနေ သူတို့တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်ကို လာသည့် မိနစ်၂၀လောက် အချိန်အတောအတွင်း မနီလာမြို့အကြောင်း၊ ရာသီဥတုအကြောင်း ပြောရင်းနှင့် လွမ်းဝေတစ်ယာက် စင်သီယာနှင့် တော်တော်ရင်းနှီးသွားသည်။ စကားပြောရင် လက်ဟန်ခြေဟန်လေးနှင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ပြောတတ်သည့် ကောင်မလေးကို ကြည့်ကာ “ဒါကြောင့် ဒီကောင်မလေးကို သူတို့company က ဧည့်ကြိုလွှတ်လိုက်တာဖြစ်မည်“ ဟုတွေးမိသည်။ စင်သီယာသည်
လွမ်းဝေတို့ နေထိုင်ရမည့် ဟိုတယ်တွင် check-in ၀င်ပြီးနောက်တွင်တော့ သူတို့ကို အပေါ်ထိတော့လိုက်မပို့တော့ပါ။ မနက်ကျရင် လာခေါ်မည်လို့သာ ပြောပြီး လှည့်ပြန်သွားသည်။ လွမ်းဝေတို့လဲ ဟိုတယ်ရောက်ပြီ ဆိုပြီး ကောင်းကောင်းနှပ်ဖို့တော့ မစဉ်းစားမိပါ။ ပြင်လာသည့် စာရွက်စာတမ်းတွေ နှင့် presentation slide တွေကို ပြန်စစ်ရင်း တော်တော်ညည့်နက်မှ အိပ်ရသည်။ ဒီလိုမျိုး ၀ီရိယရှိမှု၏ အကျိုးဆက်ကိုတော့ လွမ်းဝေတို့ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာပင် လက်တွေ့ကျကျခံစားရသည်။ သူတို့ presentation ကို တစ်ဖက် company က ကြိုက်ယုံမက လွမ်းဝေနှင့် စီနီယာ၏ သူတို့မေးသမျှကို အချက်ကျကျ ဖြေကြားနိုင်မှုတွင် သဘောအကျကြီးကျကာ နောက်ထပ်လဲ အကျိုးတူပူးပေါင်းမည့် စကားတွေ ဘာတွေပါ ပြောကုန်သည်။ လွမ်းဝေ့ စီနီယာဘိုးတော်၏ မျက်နှာတွင်တော့ အပြုံးတွေက လှိုင်လှိုင်နှင့် ဟိုလူ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်။ ဒီလူ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် ဖြစ်နေသည်။အလုပ်ကိစ္စပြီးသည့်နောက်
လွမ်းဝေတို့သည် အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပြီး ညက ပင်ပန်းထားသည်မို့ အခန်းကိုပဲ ပြန်လာခဲ့သည်။ စင်သီယာကပင် ပြန်လိုက်ပို့သည်။ ညနေကျရင် မနီလာမြို့ကို လိုက်ပြရင်း ညစာစားကြမည်ဟု သူမကချိန်းဆိုသွားသည်။ အခန်းပြန်ရောက်သည်တွင်တော့ လွမ်းဝေသည် လာသည့်ကိစ္စကလဲ အထမြောက်ကာ ပြီးသွားပြီး ညတုန်းကလဲ အိပ်ရေးပျက်ထားသည်မို့ နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ပင် အိပ်ပျော်သွားသည်။ သူ့ဘိုးတော်ကိုပင် သတိမထားမိလိုက်။ ဘယ်လောက်ကြာသွားသည်မသိ။ တံခါးဖွင့်သံကြားမှပဲ နိုးတော့သည်။ ကြည့်လိုက်တော့
ဘိုးတော်က အပြင်က ပြန်လာတာကို တွေ့သည်။လွမ်းဝေသည် ဘိုးတော်မျက်နှာက မကောင်းသည်မို့ ဘာများဖြစ်လဲလို့ မေးကြည့်ရာ ခုနကတုန်းက သူ့အိမ်ကဖုံးဆက်ကြောင်း .. သူ့ယောက္ခမကြီး ရုတ်တရက် လေဖြတ်သွား၍ ဆေးရုံတင်ထားရကြောင်းနှင့် သူအခုပဲ လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ပြီး ပြန်လာကြောင်းပြောသည်။ လွမ်းဝေလဲ လေယာဉ်ချိန်က ဘယ်တော့လဲဟု အမေးတွင်..အခုပင် ပြန်တော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း .. စင်သီယာနှင့် company ကိုသူက နှုတ်ဆက်သွားကြောင်း ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းရင်းနှင့်ပင် ပြောသည်။ လွမ်းဝေကိုမူ အေးအေးဆေးဆေးမှပဲ ပြန်လာခဲ့ဖို့ မှာသွားသည်။ ဘာမှမကြာလိုက်.. မိနစ်ပိုင်းအနည်းငယ် အတွင်းပင် အ၀တ်သေတ္တာနှင့် Laptop ကိုဆွဲကာ အခန်းထဲကနေ ပျောက်သွားတော့သည်။ ကဲ.. ကိစ္စက ဒီလိုဖန်လာမှတော့ ဘာအကြောင်းလဲ။ ညနေကျရင် ကောင်မလေးနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟု တွေးကာ လွမ်းဝေတစ်ယောက် စင်သီယာလာခေါ်မည့် အချိန်ကို စောင့်နေမိသည်။ဟိုတယ်ပေါက်ဝမှ ၀င်လာသည့် စင်သီယာကို မြင်သည်နှင့် လွမ်းဝေခမျာ ပါးစပ်အဟောင်းသားပင်ဖြစ်သည်။ ရုတ်တရက်တော့ ဘယ်လိုစကားနှင့် သရုပ်ဖော်ရမှန်းမသိ။ အကောင်းဆုံးစကားနှင့် ပြောရရင်တော့ ကောင်မလေးကို Elegant Beautyလို့ပင်တင်စားရမည် ဖြစ်သည်။ ၀တ်လာသည့် ဒီဇိုင်းက Mission Impossible III ထဲက Maggie Q နှင့်တောင် သွားတူနေသေးသည်။ ပုံခုံးသားတစ်ဝက်လောက်ပေါ်နေသည့် အနီရောက်ပိုးဖဲသား dress ရှည်ကို ၀တ်ကာ သူ့ဆီသို့ တစ်လှမ်းချင်းလျှောက်လာသည်။ ဟိုတယ်ထဲမှာ ရှိသည့် မျက်လုံးတော်တော်များများသည် သူမဆီသို့ ၀ဲကာ ကျရောက်နေသည်ကို သူမ မသိမှာမဟုတ်။ စင်သီယာကတော့ ဘေးဘီဝဲယာကို ကြည့်တောင် မနေပဲ သူ့ဆီသို့ပင် တန်းတန်းမတ်မတ်လျှောက်လာသည်။“Good Evening, Cynthia”“Good Evening, Lwan … Where is Mr. Cheung?”လွမ်းဝေလဲ
စင်သီယာ၏ အမေးတွင် သူ့စီနီယာ family matter နှင့်ပြန်သွားသည့် အကြောင်းနှင့် သူမတို့ကို နှုတ်ဆက်သွားပါကြောင်း ပြောလိုက်သည်။ စင်သီယာက ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟုသာ တစ်ခွန်းတည်းပြောပြီး ဘာမှဆက်မပြော။ လွမ်းဝေကိုသာ သွားကြရအောင်ဆိုကာ သူမက ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ခေါ်သွားသည်။ လွမ်းဝေလဲ ငါကွ ဆိုကာ ဟိုတယ်ထဲက မျက်လုံးတွေ၏ ပိုင်ရှင်မလေးနှင့်အတူ ရင်ပေါင်တန်းကာ လျှောက်လာမိသည်။ စင်သီယာ ရွေးထားသည့် ဆိုင်ကလေးက မဆိုး။ Italian Restaurant လေးဖြစ်ရုံမက ဆိုင်လေး၏ အပြင်အဆင်က Romantic ဆန်လှသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်း stage ပေါ်က တီးခတ်နေသည့် band ကလဲ ဆူဆူညံညံ မဟုတ်ပဲ နားဝင်ငြိမ့်ငြောင်းသည့် သီချင်းလေးများကိုသာ သီဆိုနေကြသည်။ တော်တော်များများ ၀ိုင်းတွေသည်လဲ သူတို့လိုမျိုး ယောက်ျားမိန်းမ အတွဲလေးတွေ
ထိုင်နေကြတာ များသည်ကို တွေ့ရသည်။ စားရင်းသောက်ရင်းနှင့် စင်သီယာက ရှင်းပြသည်မှာ ဒီဆိုင်လေးတွင် တစ်နာရီတစ်ခါ special session ရှိသည်ဟု သိရသည်။ လွမ်းဝေ အစပိုင်းတုန်းက ဘာမှန်းမသိ။ တီးဝိုင်းကို တီးခတ်နေသည့် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူက ကြေညာမှပင် သူမဆိုလိုတာက စုံတွဲတွေ တွဲကတာကို ပြောမှန်းသဘောပေါက်သွားသည်။လွမ်းဝေလဲ စလုံးမှာကတည်းက ကလပ်သွားကာ ဟိုလိုဒီလိုတွေ တတ်နေသူမို့ ဘယ်ရမလဲ။ သူတို့ စားပြီးလို့ special session နှင့်အတိုးတွင် စင်သီယာကို “Shall we? “ လို့ ဖိတ်ခေါ်ကာ ဆွဲထုတ်သွားသည်။ တီးလုံးသံ ငြိမ့်ငြိမ့်ငြောင်းငြောင်းတွင် စင်သီယာ၏လက်က သူ့ပုံခုံးပေါ်ရောက်လာသလို သူ့လက်ကလဲ ကောင်မလေး၏ ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကို အသာပွေ့ဖက်မိသည်။ ဆန့်တန်းထားသည့် သူတို့နှစ်ဦး၏ လက်က တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆုပ်ကိုင်မိသွားကာ သံစဉ်ထဲတွင် မျောပါသွားသည်။ နှစ်ဦးသား ကိုယ်ချင်းက နီးကပ်နေကြ၍ တစ်ဦး၏ ရင်ခုန်သံကို တစ်ဦးက ကြားနေရသလို တစ်ယောက်၏ မျက်ဝန်းအကြည့်တွေကိုလဲ တစ်ယောက်က အဖြေရှာနေမိကြသည်။ သိပ်တော့ အချိန်ကြာကြာ
အဖြေရှာမနေလို့က်ရပါ။ သီချင်းတစ်ပုဒ်မဆုံးခင်မှာပင် စင်သီယာ လက်နှစ်ဖက်စလုံးက သူ့လည်ပင်းကို သိုင်းယှက်လာသလို လွမ်းဝေ ကိုယ်တိုင်လဲ ကောင်မလေး၏ ခါးလေးကို တင်းတင်းရစ်ပွေ့ဖက်ထားသည်။ ထွားအိနေသည့် ရွှေရင်သာမက ချပ်ချပ်လေးဖြစ်နေသည့် ဆီးစပ်လေးကပါ သူနှင့် ထိကပ်နေသည်မို့ တကိုယ်လုံးရှိ သွေးတွေ ဆူပွက်လာသည်။နှစ်ဦးသား တိုင်ပင်ထားစရာ မလိုပဲ. .ဆိုင်လေးထဲက ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ Taxi ထဲ ၀င်ထိုင်မိသည်နှင့် ဟိုတယ်ကိုပဲ ပြန်မောင်းခိုင်းလိုက်သည်။ စင်သီယာက သူ့ရင်ခွင်ထဲတွင် ကျော့ကျော့လေးပါလာသည်။ လောလောဆယ်တော့ လွမ်းဝေဘာမှမလုပ်သေး။ ကောင်မလေး၏ ခါးကိုသာ အသာပွေ့ဖက်ထားရင်း သူ့လက်က စွင့်ကားနေသည့် တင်သားလေးတွေကို ပွတ်သပ်ဆော့ကစားပေးနေသည်။ တော်တော့်တောင့်တဲ့ ဖားမလေးပင်။ လွမ်းဝေ စလှုပ်ရှားသည့် နေရာကတော့ အခန်းရှိရာသို့ အတက် ဓါတ်လှေကားထဲတွင် ဖြစ်သည်။ ဘာမှမကြာသည့် ဓါတ်လှေကား စီးချိန်လေးအတောအတွင်းကိုပင် လွမ်းဝေ၏ နှုတ်ခမ်းက စင်သီယာ၏ နှုတ်ခမ်းချိုချိုလေးကို သူပိုင်နယ်မြေတစ်ခု အဖြစ် တံဆိပ်ခတ် သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။ ကျန်သည့် နေရာတွေကတော့ အခန်းထဲရောက်မှ တံဆိပ်ခတ်ရတော့မည်။ေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေေ
ကျနော့်ရဲ့  ခရစ်စမတ် နှင့် နှစ်ကူး အမှီ ကျောင်းအတွက် အမှတ်တရဆိုပြီး ရေးပေးတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို လာရောက်ဖတ်ရှုကျတဲ့ ညီအကို မောင်နှမ (စာဖတ်ပရိတ်သတ်) အားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ နောက်ထပ် တစ်ပို့စ်မတင်ရသေးပဲနဲ့ view က ၃၀၀ကျော်တောင် ဖြစ်သွားတာကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးမိပါတယ်။ တခုပဲ ရှိတာက ... မြားကလေးတွေများ နှိပ်ဖို့ မေ့သွားတာလား ... ကျနော်ပဲ ရေးတာမကောင်းလို့လား မသိ ..... စိတ်ထဲ တမျိုးလေးတော့ ဖြစ်နေတယ် ... အင်း .... ကြည့်ရတာ
...မြားကလေးကပဲ သေးလို့ ပျောက်နေတာလား ....မသိ ။ ကျနော်ရေးတာတွေပဲ ငါးသိုင်းများ ဟင်းဟုံဆိုပြီး ဖြစ်နေလား မသိ။ ဒါမှမဟုတ် ... တိတ်တိတ်လေးများ လာကြည့်ပြီး ပြန်သွားကြတာလား မသိ ။ ဒါမှမဟုတ် ... မိုးတွေပဲ ရွာနေလို့ အိပ်ယာထဲများ ကွေးနေကြတာလား မသိ။ ဒါမှမဟုတ် Monday ဖြစ်နေလို့ ကျနော့်လိုမျိုး အလုပ်တွေနဲ့ ရှုပ်နေကြတာလား မသိ ...မသိခြင်းပေါင်းများစွာနှင့် အခန်းတံခါးဖွင့်ဖွင့်ပြီးချင်း လွမ်းဝေသည် စင်သီယာကို ဆွဲကာ အထဲသို့ခေါ်သည်။
အခန်းအလယ်က ကုတင်တွေဆီသို့ ခေါ်မသွားဖြစ်သေး။ အပေါက်ဝနားက နံရံကိုကပ်ကာ ကောင်မလေး၏ မေးကို လက်ဝါးနှင့်ညှပ်ကိုင်ကာ အားရပါးရ နမ်းသည်။ နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုချင်း ဘယ်ပြန်ညာပြန်ထိကပ်နေရုံမက သူတို့နှစ်ဦး၏ လျှာအသီးသီးကလဲ ပွတ်ဆွဲကာ ကျီစယ်နေကြသည်။ စင်သီယာသည် ပွင့်လင်းရဲတင်းသည့် ဖားမလေးမို့ လွမ်းဝေ နမ်းရှုံ့ နေသည်ကို ငြိမ်ငြိမ်လေးခံမနေပါ။ သူမ၏လက်က သူဝတ်ထားသည့် tuxedo အင်္ကျီ၏ ဘိုးတိုင်ကို ဖြုတ်ကာ ကြယ်သီးတွေကို တစ်လုံးချင်း ဖြေချွတ်သည်။ တဖျောက်ဖျောက်နှင့် ကြယ်သီးတွေ ကုန်သွားသည့်နောက် လွမ်းဝေက အင်္ကျီကို ဆွဲချွတ်ပေးလိုက်သည့် အချိန်တွင် သူမ၏လက်ကလဲ အောက်က စတိုင်ပန့်၏ ခါးပတ်ကိုဖြုတ်ကာ ဇစ်ကို ဆွဲချသည်။ လွမ်းဝေ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် အတွင်းခံဘောင်းဘီနှင့် စွပ်ကျယ်သာ ကျန်တော့သည်။စင်သီယာသည် လွမ်းဝေနှင့် အပြိုင်နမ်းနေရာမှ သူ့ကိုဆွဲလှည့်သည်။ ဒီတခါ လွမ်းဝေက နံရံကို ကပ်လျက်ဖြစ်သွားသည်။ သူမနှုတ်ခမ်းတွေက သူ့ကိုတေ့ကာ ရမက်ကြမ်းကြမ်းနှင့် ပြန်နမ်းနေသည်။ တော်တော်လေးကြာမှ သူမသည် လွမ်းဝေပကို ပြုံးကာကြည့်ရင်း လူချင်းအနည်းငယ် ခွာသည်။ ဘယ်ကဘယ်လို ဆွဲလုပ်သည်ကို လွမ်းဝေသေချာမသိလိုက်။ သူမလက်ကလေး အမြှောက်တွင် မလုံတလုံ dress လေးက တခါတည်း အောက်ကို ပြေလျော့သွားသည်။ လွမ်းဝေ၏
စိတ်ဆင်ရိုင်းသည် မျက်စိရှေ့ က ဘွားခနဲ ထွက်ပေါ်လာသည့် စင်သီယာ၏ အလှအပတွင် ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်သည်။ ကြည့်ဦးလေ။ ဖောင်းမို့ မောက်ကြွနေသည့် သူမ၏ ရင်သားနှစ်မွှာက အောက်ခံ ဘရာအနီရောင်သေးသေးလေးအောက်မှ ရုန်းကြွနေသည်။ ၀မ်းဗိုက်သားလေးက ဆူထွက်မနေပဲ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်။ အံမယ် ကောင်မလေးက ချက်မှာတောင် ကွင်းကလေးနှင့်။ အောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လဲ သွယ်လျဖြောင့်စင်းနေသည့် ပေါင်တံတွေကြားက စောက်ပတ်လေးကလဲ ဇာပင်တီ အနီရောင်လေးသာ ခြားထားသည်။လွမ်းဝေသည် အချိန်ဆိုင်းမနေတော့ပဲ ဘာမှမကျန်တော့သည့် သူ၏ ကိုယ်ပေါ်က လက်ကျန်အ၀တ်အစားတွေကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။
ထောင်မတ်နေပြီ ဖြစ်သည့် သူ၏ လီးတန်ကြီးက အောက်ခံဘောင်းဘီ ကျွတ်သွားသည်နှင့် တန်းခနဲပေါ်လာသည်။ စင်သီယာသည် ဒါကို မြင်သည်နှင့် …“Nice one … Do you have condom? ““Yes, I have” လွမ်းဝေသည်
ဖီလစ်ပိုင်ကို သွားရမည်ဆိုကတည်းက ပြင်ဆင်လာခဲ့သူမို့ ချက်ချင်းပင် လက်ဆွဲအိတ်ဘေးက Durex အထုတ်ကို ဆွဲထုတ်ရင်း ကောင်မလေးဘက်လှည့်ကာ မြှောက်ပြလိုက်သည်။ စင်သီယာသည် လွမ်းဝေကို စွဲမက်ဖွယ် အပြုံးလေးနှင့် ပြုံးကာပြရင်း ကိုယ်ကလေးကို နောက်လှည့်ကာ တင်ပါးလေးကို လိမ်၍ပြသည်။ ခါးကလေးကလိမ်သွား၍ စွင့်ကား တင်းအယ်နေသော တင်သားတွေက အသက်ရှုမှားလောက်အောင် လွမ်းဝေ၏ စိတ်ကိုလှုံဆော်သွားသည်။ ကောင်မလေးသည် ဒီလို ကိုယ်ကလေး လိမ်နေရင်းနှင့်ပင် နောက်ကျောက ဘရာချိတ်ကို ဖြုတ်သည်။ ရှေ့ ကို ပြန်အလှည့်လာတွင်တော့ ..စင်သီယာ၏ နို့တွေသည် ဘရာအချုပ်အနှောင်ကင်းစွာ ပကတိ အတိုင်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ ကောင်မလေး၏ နို့တွေသည်
မကြီးလွန်း မသေးလွန်းသော အရွယ်ရှိသည်။ သူမ၏ အရပ် ကိုယ်ခန္ဒာအချိုးအစားနှင့်
လိုက်လျောညီထွေသည့် အရွယ်ဖြစ်၍ မြင်ရသူ့ စိတ်ကို ဆူဝေတက်စေသည်။ လုံးဝန်းပြည့်မောက်ကာနေသည်။ စင်သီယာသည် ဘရာကို ဖြုတ်လိုက်သော်လဲ အောက်က
ပင်တီကိုတော့ ဆွဲမချွတ်သေးပါ။ အခန်းထဲတွင် ကုတင်က နှစ်လုံးရှိနေလေရာ သူမသည် အနီးဆုံးဖြစ်သည့် မွေ့ယာပေါ်ခြေထောက်လေး ဆင်းကာ ထိုင်ရင်း လွမ်းဝေကို
လက်ညှိုးကလေး ကွေးကာဆန့်ကာနှင့် လှမ်းခေါ်နေသည်။ ဒါမျိုးဖြစ်နေမှတော့
ဘာရတော့မလဲ။ လွမ်းဝေသည် လက်ထဲတွင် အခုထက်ထိ ကိုင်ကာ ဘာမှမလုပ်ရသေးသည့် ကွန်ဒွန်းကို ခပ်မြန်မြန်ပင် ဖောက်လိုက်ပြီး သူ၏ ထောင်မတ်နေသည့် လီးတန်ကြီးအပေါ်ကနေ တပ်စွပ်လိုက်သည်။ နေရာကျသည်နှင့် စင်သီယာနားသို့ လျှောက်လာသည်။ ကောင်မလေးက အလိုက်သင့် လက်ကလေးမြှောက်ကာ ကြိုဆိုနေသဖြင့် သူသည် စင်သီယာကို ဖက်ရင်း မွေ့ယာပေါ်သို့ လှဲချမိကြသည်။ လွမ်းဝေ၏ ပါးစပ်သည် ဒီတချီတော့ စင်သီယာ၏ နို့အုံလေးပေါ်သို့သာ ဦးတည်၍ ရောက်သွားသည်။ စပျစ်သီးခပ်သေးသေး အရွယ်လောက်ရှိမည့် နို့သီးလေးများကို ပါးစပ်ဖြင့် အငမ်းမရ တပြွတ်ပြွတ်နှင့် စုပ်ယူလိုက်သည်။ စင်သီယာမှာတော့ ထိမိလှသည့် လွမ်းဝေ၏ နို့စို့ချက်တွေတွင် လျှာကလေးနှင့် သူမနှုတ်ခမ်းကို သပ်ကာ “တရှီးရှီး“ ဖြစ်လာရုံမက တကိုယ်လုံးလဲ မရိုးမရွဖြစ်၍ လာသည်။ သူ၏ ကျောပြင်ကို ပွတ်သပ်ပေးနေသည့် စင်သီယာ၏ လက်ကလေးတွေကလဲ လွမ်းဝေကို လုပ်ပါတော့ဟု အချက်ပေးနေသလို။“You’re lovely”“Thanks”လွမ်းဝေသည်
နို့စို့နေရာမှ ရပ်ကာ ကောင်မလေး၏ ပင်တီအစလေးကို ကိုင်ကာ ချွတ်လိုက်ရင်း ပြောသည်။ စင်သီယာသည်လဲ ကာမစိတ်က တော်တော်အရှိန်ရနေပြီမို့ ရမက်ခိုးဝေနေသည့်
အကြည့်လေးနှင့် ပြန်ကြည့်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ အောက်ဘက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ..စင်သီယာ၏ စောက်ပတ်လေးသည် အမွှေးအမှင်ကင်းမဲ့နေသည်။ ရိတ်ထားတာထင်ရသည်။ ဆီးစပ်အထက်ပိုင်းတွင် အကွက်ရာလေးထင်နေသည်။ ပြောင်တလင်းခါနေသည့် အဖုတ်လေးမို့ တပ်မက်မောစရာပင်။ လွမ်းဝေသည် လီးတန်ကြီးကို လက်ဖြင့်ကိုင်လောက်ပြီး ကောင်မလေး၏ စောက်ဖုတ်ပြောင်ပြောင်လေး၏ အကွဲကြောင်းလေးအောက်က တွင်းကလေးထဲသို့ ဖိ၍ ထောက်ထည့်လိုက်သည်။”အင်း ..ရှီး…ရှီး…“စင်သီယာ၏ ကိုယ်ကလေးက
ဆတ်ခနဲတွန့်သွားပြီး သူမ၏ လက်တွေက အိပ်ယာခင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ လွမ်းဝေသည်လဲ ဖားမလေး၏ စောက်ပတ်လေးက စီးကာ ကျဉ်းကျပ်နေသည်ကို တွေ့ရ၍ အရသာအရှိကြီး ရှိကာ လီးတန်ကြီးကို တရစ်ချင်း ထိုးသွင်းနေမိသည်။”ဗြစ် …ဗြစ်…အင့်…အင့်……အီး….အီး“လီးတန်ကြီးက
စောက်ပတ်ထဲကို တိုးဝင်နေမှုနှင့် အတူ စင်သီယာ၏ မျက်တောင်လေးမှာ မှေးကာ ကျနေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ လွမ်းဝေ၏ ဒုတ်ထိပ်က စင်သီယာ၏ သားအိမ်ဝကို သွားထောက်သည်။ သူတို့နှစ်ဦး၏ ဆီးစပ်ချင်းကလဲ အကြားအလပ်မရှိအောင်ကို ထိကပ်သွားသည်။ လွမ်းဝေသည် နေရာကျသည်နှင့် ကိုယ်ကိုကျကျနနပြင်ကာ စင်သီယာ၏ ပုခုံးအား အားယူ၍ ဆွဲကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် စတင်ဆောင့်တော့သည်။ ‘Your dick feels amazing , fuck me harder “”အင်း…အင့်….ဟင်း…ဟင်း”စင်သီယာသည်
လွမ်းဝေ၏ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ချမှုတွေကို မမှုပါ။ သူမကပင် အောက်ကကော့ကာ ပင့်တင်ပေးသေးသည်။ လွမ်းဝေသည် အရည်ကြည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်နေမှုကြောင့် သွင်းရထုတ်ရ အဆင်ချောလာသည့် ဖားမလေး၏ စောက်ပတ်ကို အားမနာတမ်းပင် ဆောင့်လိုးတော့သည်။ လွမ်းဝေ၏ တရှုးရှုးတရှဲရှဲနှင့် ဆောင့်ချက်တွေက အသည်းခိုက်အောင် ကောင်းလွန်းလှသဖြင့် စင်သီယာ၏ နှုတ်ခမ်းဖျားလေးမှ “Oh ..yes” ဆိုသည့် အသံလေးများက လှိုင်လှိုင်လေးထွက်နေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ လွမ်းဝေ၏ လီးတန်ကြီးတလျှောက် တင်းကာဖောင်းလာပြီး အရသာက အထွတ်အထိပ်ရောက်သွားကာ လရည်တွေကို ကွန်ဒွန်းအပြည့် ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်။ လူလဲ အတော်မောဟိုက်သွားသည်။ သတိထားပြီး လီးတန်ကြီးကို ပြန်ချွတ်ကာ ကွန်ဒွန်းကို အရင်ဖြုတ်လိုက်ရသည်။ ပြီးမှ ကောင်မလေး၏ ဘေးနားတွင် ယှဉ်လဲကာ အမောဖြေနေမိသည်။ စင်သီယာကလဲ သူ့ကို ကာမဆန္ဒပြည့်ဝသွားသည့် မျက်နှာလေးနှင့် ပြုံးကာကြည့်နေသည်။“ဘယ်လိုနေလဲ ..စင်သီယာ““ကောင်းတယ် ….လွမ်းက အလိုးကောင်းတယ်““စင်သီယာ စောက်ပတ်လေးကလဲ လိုးလို့ ကောင်းလို့ပါ …ရည်းစားမရှိဘူးလား““ရှိခဲ့တယ် …လွမ်း…ပြတ်သွားတာ မကြာသေးဘူး.. အခုမှပဲ ဆန္ဒပြည့်တော့တယ်“သြော်…ဒါကြောင့်
ဒီကောင်မလေး ဒီလောက်တောင် ဆာနေတာနေမှာ။ လွမ်းဝေသည် ဗမာမလေးနှင့် တော်တော်ဆင်တူနေသည့် ကောင်မလေး စကားတွင် သဘောကျစွာ ပြုံးသည်။ ဗမာမလေးတွေနှင့် မတူသည်က ဖားမလေးတွေသည် sex ကိစ္စတွင်ပွင့်လင်းကြချင်းသာ။ အခုလဲ စင်သီယာသည် သူမအလိုကို ဖြည့်ပေးသည့် လွမ်းဝေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပင် ပြောရှာသည်။ စင်သီယာသည် လွမ်းဝေကို ကြည့်နေရာမှ လီးတန်ကြီးကို သွားအမြင်တွင်..“အယ်..လွမ်းဟာကြီးက မာနေသေးတယ်နော် ..ပျော့မသွားဘူး““ဟုတ်တယ် ..စင်သီယာ..ဒီကောင်ကြီးက တစ်ချီလောက်နဲ့ ၀တာမဟုတ်ဘူး …အနည်းဆုံး နှစ်ချီ သုံးချီလောက်မှ အားရတာ ..စင်သီယာ…အားတယ်ဟုတ် ““အားပါတယ် …ပြသနာ မရှိဘူး …ဒါဆို ဒီည လွမ်းနဲ့ နေလိုက်မယ်လေ .သန်ဘက်ခါ ဆိုရင်ပဲ လွမ်းပြန်ရတော့မယ် ဟုတ် ...“လွမ်းဝေ စင်သီယာ၏ စကားတွင်တော့ သဘောအကျကြီး ကျသွားသည်။ ကြောင်ခံတွင်းပျက်နှင့် ဇရက်တောင်ပံကျိုး တွေ့မှတွေ့တတ်ပလေ။ “ကဲ… ဒီတစ်ခါတော့ စင်သီယာ အလှည့်ပေါ့ ““လွမ်း ..ပက်လက်လှန် နေလိုက်“စင်သီယာသည်
ပြောပြီးသည်နှင့် လှဲနေရာမှ ထကာ လွမ်းဝေ၏ လီးတန်ကြီးကို လှမ်းဆုပ်ကိုင်သည်။ သူ၏ သုတ်ရည်တွေနှင့် စိုနေသဖြင့် လွမ်းဝေက သုတ်လိုက်ဦးလို့ ပြောမည် အပြုတွင်ပင် သူမသည် ဆတ်ခနဲ ခေါင်းကိုငုံ့ကာ လီးတန်ကြီးကိုဖမ်းငုံလိုက်သည်။ လွမ်းဝေ၏ စကားတွေသည် လည်ချောင်းထဲ မရောက်ခင်ပင် တစ်ဆို့ ပျောက်ဆုံးသွားသည်။ တကယ်မလွယ်တဲ့ ဖားမလေးပင်။ ဘာမှမပြောတော့ပဲ ခုနကတုန်းက မွေ့ယာခေါင်းရင်းတွင် တင်ထားလိုက်သည့် လက်ကိုင်အိတ်ထဲကနေ နောက်ထပ် ကွန်ဒွန်းတစ်ခုကို ဆွဲထုတ်ကာ အသင့်စောင့်နေလိုက်သည်။ ကောင်မလေးသည် ကြည့်ရတာ သူ့ကို ပါးစပ်နှင့် ပြီးအောင်တော့ လုပ်မည် မထင်ပါ။တကယ်လဲ စင်သီယာသည် လွမ်းဝေကို ပါးစပ်နှင့် ပြီးအောင် မလုပ်ပါ။ လီးတန်ကြီး တင်းမာလာအောင်သာ စုပ်ပေးပြီး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သည်နှင့် သူ့လက်ထဲက အဆင်သင့် ကိုင်ထားသည့် ကွန်ဒွန်းကို လှမ်းယူကာ ပြန်လည်၍ မတ်ထောင်နေပြီ ဖြစ်သည့် အတန်ကြီးထိပ်တွင် စွပ်ချသည်။ ပြီးရင်တော့ သူမလက်တစ်ဖက်ဖြင့် မြဲမြဲကိုင်ပြီး လွမ်းဝေပေါ်တက်ခွကာ စောက်ပတ်ဝလေးနှင့် အသာဖိပိတ်ဆွဲသည်။ အစောပိုင်းတုန်းက တစ်ချီပြီးထားလို့ စိုနေသည့် စောက်ပတ်ဝကအရည်လေးတွေက ကွန်ဒွန်းနှင့် ထိမိကာ ဆီသုတ်လိမ်းထားသလို
ဖြစ်သည်။ထို့နောက်တွင်တော့ စင်သီယာသည် လီးတန်ကြီကို စောက်ပတ်ဝတွင်တေ့ကာ အသာဖိ၍ ထိုင်ချသည်။ မာကျောတောင့်တင်းနေသည့် အတန်ကြီးသည်
တကျော့ပြန် သူမစောက်ပတ်ထဲသို့ အိခနဲနေအောင် တိုးဝင်သွားသည်။“Oh…it’s good”“ဗြစ်….ဗြစ်…အင့်…အင့်…ရှီး…ရှီး“စင်သီယာ၏
စောက်ပတ်သည် လွမ်းဝေအတန်ကြီးနှင့် အထာကျသွားသည်မို့ သိပ်ကြာကြာမသွင်းလိုက်ရပါ။ မကြာမီပင် အတန်ကြီးက စောက်ခေါင်းတလျှောက် ၀င်ရောက်သွားသည်။ စင်သီယာသည် အတန်ကြီး ၀င်သွားသည့်နောက် လွမ်းဝေ၏ ရင်ပတ်ပေါ်ကို လက်ထောက်ကာ မြင်းစီးသလို စတင်လှုပ်ကာ ဆောင့်ပေးသည်။ လွမ်းဝေကလဲ
သူမ၏ လုံးကျစ်တင်းကားနေသည့် ဖင်သားကြီများကို ဆုပ်ကိုင်ကာ အောက်ကနေ၍ ဆွဲကာ
ကစားပေးသည်။ လီတန်ကြီးနှင့် သူမ၏ အတွင်းသားတွေ ပွတ်တိုက်နေကြသလို စင်သီယာကလဲ တချက်ချက် ညှစ်ကာဆွဲသည်။“How’s it , Lwan?”“It’s amazing”လွမ်းဝေသည်
ရမက်သံလေး လွှမ်းကာ သူ့ကို မေးနေသည့် စင်သီယာ၏ မျက်နှာလှလှလေးကို ကြည့်ကာ ဖြေလိုက်သည်။ တင်ပါးအိအိထွားထွားကို ဆုပ်ကိုင်ဆော့ကစားနေသည့် လက်ကို ရုတ်ကာ
ဘောင်ဘင်ခတ်အောင်လှုပ်နေသည့် ရွှေရင်ဖြိုးဖြိုးကို တလှည့်ဆုပ်ကိုင်ကာ အရသာခံနေမိသည်။ စင်သီယာက ခုန်ပေါက်နေ၍ သူမရှေ့တိုး နောက်ငင်ပြုလုပ်တိုင်း နို့အုံသားလေးတွေက အိခနဲ သူ့လက်ထဲ တင်းခနဲဖြစ်သွားသည်။တော်တော်လားကြာတော့
စင်သီယာ၏ ဆောင့်ချက်တွေက မြန်လာသလို ကိုယ်လေးကလဲ လေမုန်တိုင်းမိသည့် လှေငယ်ပမာ ထွန့်ထွန့်လူးနေတော့သည်။ သိပ်တော့မကြာလိုက်။ စင်သီယာသည် လီးတန်ကြီးကို အရင်းထိ မြုပ်သွားအောင် ထိုင်ချလိုက်ရင်း လွမ်းဝေ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ကာကျသည်။ သူ့အတန်ကြီးကို ပွတ်ကာဆွဲနေသည့် အတွင်းသားများကြောင့် ကောင်မလေး နောက်တစ်ချီ ထပ်ပြီးသွားမှန်း လွမ်းဝေသိသည်။ သူလဲပဲ နောက်ကျမခံချင်သည်နှင့် ကောင်မလေး၏ ဖင်ကြီးကို အားရပါးရ ညှစ်ကိုင်ကာ လီးတန်ကြီးကို အားဖြင့် ကော့ပင့်ထိုးသည်။ ပူခနဲနေအောင်ပင် စောက်ပတ်ထဲကို တိုးဝင်သည်။ ဆယ်ချက်ပင် မပြည့်လိုက်။ သူလဲပဲ
လီးတန်တလျှောက် အကြောတွေ တင်းသွားကာ ဒုတိယတချီ လရည်များကို ပန်းထုတ်လိုက်သည်။ သူ့အပေါ်ကနေ အသက်ကို အလုအယက်ရှုကာ အမောဖြေနေသည့် စင်သီယာကို ပွေ့ဖက်ထားရင်း သူလဲပဲ မျက်လုံးမှိတ်ကာ မှေးနေမိတော့သည်။လွမ်းဝေနှင့်
စင်သီယာသည် အဲဒီနေ့ညက နောက်ထပ်နှစ်ချီလောက် ထပ်ဆွဲဖြစ်သည်။ လေးဘက်ထောက်နှင့် တစ်ချီ၊ ပုဇွန်တုပ်ကွေးနှင့် တစ်ချီ အမုန်းပင်ကိုင်ပြစ်လိုက်သည်။ ပိုအဆင်ပြေသွားသည်က နောက်တစ်နက် မနက်တွင် စင်သီယာက ညတုန်းကပန်းထားလို့ဆိုကာ အလုပ်မသွားချေ။ လွမ်းဝေလဲ အမှန်ဆို ထပ်ဆွဲနေချင်သော်လဲ စင်သီယာက မနီလာမြို့ကို လိုက်ပြမည်ဆို၍ သူလဲပဲ ကောင်မလေးနှင့် ထွက်လည်ကြသည်။ မနီလာသည် မြန်မာပြည်နှင့် သိပ်မခြားချေ။ ထူးခြားတာ သူတို့ဆီက bus ကားတွေသည် မြန်မာပြည်က တစ်ချိန်တုန်းက ခေတ်စားခဲ့သည့် ဒေါ့ဂျစ်လိုကားတွေကို အလှဆင်ထားကြချင်း ဖြစ်သည်။ Jewelly Shop တစ်ခုအရောက်တွင်တော့ ကောင်မလေးအတွက် ခရစ်စမတ် အမှတ်တရ ဆိုကာ ရွှေဖြူဟန်းချိန်းလေး တစ်ခု ၀ယ်ပေးလိုက်သေးသည်။ အဲ …ညဘက် အခန်းပြန်ရောက်တွင်တော့ စင်သီယာက အဲဒီအတွက် သူ့ကို ခရစ်စမတ် အမှတ်တရ ပြန်ပေးရှာသည်။ လွမ်းဝေလဲ ကျေကျေနပ်နပ်ပင် ကောင်မလေး လက်ဆောင်ကို ခံယူရင်း နောက်တစ်ခါ ဖထုတ်ကို အလုပ်ကိစ္စနှင့် သွားရမည်ဆိုလျှင် သူ့ကို လွှတ်ရန် ကုမ္မဏီကို ပြောရမည်ဟု စဉ်းစားနေလိုက်မိတော့သည်
လွမ်းဝေ၏ မြင်ကွင်းတွင် တိမ်တိုက်တွေက ပျောက်ကွယ်သွားကာ သိပ်မကြာခင်ပင် အိမ်ခေါင်မိုးသွပ်ပြားတွေကို လှမ်းမြင်ရသည်။ နီညိုရောင် သွပ်ပြားတွေက ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စုနှင့် တွေ့လာရသည်။ သြော် … မြန်မာနိုင်ငံသည် ရန်ကုန်မြို့တောင်မှ ဘာမှမပြောင်းလဲသေးပါလားဟု တွေးလိုက်မိသည်။“Ladies and Gentlemen, we are now approaching Yangon International Airport. Please be remained seated until ……”လေယာဉ်မှုး၏
ပြောကြားသံ မရှေးမနှောင်းတွင်ပင် လေယာဉ်ဘီးနှင့် မြေပြင်ကို ထိကပ်သွားသည်မို့ လေယာဉ်သည် ငြိမ့်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ လွမ်းဝေ၏ ရင်ထဲတွင်လဲ အမျိုးအမည် မသိသော ခံစားချက်တစ်ခုကို ငြိမ့်ခနဲ ခံစားလိုက်ရတော့သည်။ အော် …
အမိမြေကို ပြန်ရောက်လာပါလား ကွယ်….လွမ်းဝေသည် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ … လေယာဉ်က အရှိန်လျော့ကာ ရွေ့နေတုန်းရှိသေးသည်…ကိုရွှေမြန်မာတွေသည် နေရာက ထကာ အထုတ်ဆွဲသည့်လူက ဆွဲနေကြချေပြီ။ အမ်… အစောပိုင်းတုန်းက လေယာဉ်မှုးပြောကြားသည့် စကားနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိလှပါလား။ အော် … သူတို့ခမျာလား အိမ်ပြန်ချင်စိတ်တွေက လွှမ်းမိုးနေလို့ ဖြစ်မှာပါဟု လွမ်းဝေ တွေးမိသည်။ သူကတော့ သူ့ဘေးက တရုတ်စုံတွဲ လင်မယားက မထသေးသဖြင့် အေးအေးဆေးဆေးသာ ထိုင်နေလိုက်သည်။ အံမယ် …
ရှေ့က ကောင်မလေးကတော့ သူ့လို မဟုတ်။ ထကပင် တန်းစီနေတဲ့အထဲ ပါသွားပြီ။ လာစောင့်နေမယ့် ဘဲဘဲများ ရှိနေလို့လား..အ ဟီး ။လွမ်းဝေ လေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းကာ immigration ကိုရောက်တော့ သူ့ကပဲ အေးအေးဆေးဆေး လုပ်နေလို့လား မသိ။ သူ့ရှေ့တွင် လူတွေက တပုံကြီး ဖြစ်နေသည်။ အို … ကိုယ့်အိမ် ကိုယ်ပြန်တာပဲ လောစရာမှ မရှိတာ ဆိုကာ အေးအေးဆေးဆေး စောင့်နေလိုက်သည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းက မှန်ချပ်၏ နောက်တွင်တော့ ပြန်လာသည့် အသိမိတ်ဆွေ ဆွေမျိုးမောင်နှမကို လာကြိုနေသည့် လူတွေကလဲ မနည်းပင်။ အေးလေ ..လူတစ်ယောက်ကို လူနှစ်ယောက်ကသာ လာကြိုသည့်နှုန်းနှင့် တွက်ကြည့်လျှင်ပင် လေယာဉ်တစ်စင်းလုံးစာ ဆိုတော့ နည်းတာ ဘာဆန်းမလဲ။လွမ်းဝေသည် နောက်ဆုံးကစီမိသဖြင့် immigration တွင် သွေးတောင့်အောင်ပင် ရပ်ပြီးမှ အပြင်ကို ရောက်သည်။ အခုတော့မှ လွမ်းဝေလဲ
လာကြိုမည့် ညီငယ်ကို အားနာပြီး ခပ်မြန်မြန် Luggage Belt ကို လျှောက်သွားသည်။ အယ် … ဟန်ကျတာပါ့ .. ။ သူရောက်တာနှင့် အကိုက် သူ့သေတ္တာက ထွက်လာသည်မို့ ကမန်းကတမ်း ကောက်မကာ လှည်းပေါ်သို့ တင်လိုက်သည်။ ဘေးနားက ရပ်ကြည့်ရပ်ကြည့် လုပ်နေသည့် အကူကောင်ကလေးတွေကို လက်ကာပြလိုက်ရင်း Green Channel ပေါက်ဆီသို့ တွန်းကာ ထွက်လာခဲ့သည်။ သူကပဲ နောက်ဆုံး ဖြစ်နေလို့လား မသိ။ ဘာမှ ဖွင့်ပြလိုက်စရာမလိုပဲ အပြင်ကို ချောချောမောမောပင် ထွက်လို့ရသည်။
ဒီလိုမျိုး custom ကလူတွေက သဘောကောင်းလိုက်ချင်းက သူ့အတွက် အတော်ပြသနာ ဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဟု အဲဒီတုန်းက လွမ်းဝေ မသိခဲ့ပါ။ဒီကိစ္စကို လွမ်းဝေ
ဘယ်တော့မှ သိသလဲ ဆိုရင်တော့ အိမ် ကို ရောက်မှပဲ သိသည်ဟု ပြောရမည်။ အိမ်ထဲကနေ အားရ၀မ်းသာစွာ ပြေးထွက်လာသည့် အမေ့ကို တန်ပြန်ပွေ့ထားရင်း လွမ်းဝေသည် သူ့ဆီသို့ လျှောက်လာသည့် ညီမငယ်ကိုလဲ ပြုံးကာ ပြလိုက်သည်။ “ဟေး… နွေလေး …. ဒီနေ့ ဂိုက်မရှိဘူးလား ….““မရှိဘူး …ကိုကြီး… ကိုကြီးလာမယ် ဆိုလို့ နားထားတယ် …““အံမယ် ..ငါ့ ညီမက တယ်ဟုတ်နေပါလား … ကြည့်ရတာတော့ ကိုကြီးကို့ ကြိုချင်တာလား ..လက်ဆောင်ကို လိုချင်တာလား …““ကိုကြီးနော်…. ညီမလေးကိုများ…“လွမ်းဝေသည်
အနားရောက်လာပြီး သူ့လက်မောင်းကို ခိုတွဲကာ နွဲ့ဆိုး ဆိုးနေသည့် ညီမငယ်ကို
ကြည့်ပြီး ဒီကောင်မလေး ဒီပုံစံနဲ့ ဆရာမလုပ်နေတယ် ဆိုတာ ယုံရခက်ခက်ပဲလို့တောင် တွေးနေမိသည်။ “ကဲ..ပါ …သမီးရယ် ….အိမ်ထဲရောက်ပါစေ ဦး …ညီး အကိုကို …အိမ်ထဲရောက်မှ ပြောပါ့ ..”“ဟုတ်ပါ့ …နွေမ ..လာ ..ဒီမှာ အိတ်လာမဦး …“နောက်က
လွမ်းဝေ အိတ်ကို မလာသည့် ညီဖြစ်သူ မြတ်သူက အပြောတွင်မှ ညီမဖြစ်သူ နွေနွေသည် သူ့ဘေးကနေခွာကာ သူ့ကိုလေး နှင့်အတူ သူ့အိတ်ကို တဖက်စီက မကာသယ်လာသည်။ လွမ်းဝေသည် အဲဒီတော့မှ သူ့အိတ်ကို ကြည့်ပြီး မျက်မှောင်ကုတ်သွားသည်။ အမ်.. ငါ့အိတ်က ကိုင်းထုတ်လို့ ရပါတယ် … ဟိုကောင်က ဘာဖြစ်လို့ ..ကိုင်းထုတ်ပြီး တွန်းမလာတာလဲ …“ကိုလေး.. ငါ့ဟာက ကိုင်းထုတ်လို့ ရတယ်လေ …““မင်းက ..ဘာဖြစ်လို့ ကိုင်းထုတ်ပြီး ဆွဲမလာတာလဲ …“လွမ်းဝေသည်
အိမ်ပေါက်ဝတွင် ၀တ်လာသည့် ရှူးဖိနပ်ကို ချွတ်ရင်း မျက်မောင်ကြုံ့ကာ မေးမိသည်။ ဧည့်ခန်းအလယ်က ကြမ်းခင်းတွင် ချထားသော အိတ်ကိုကြည့်ရင်းလဲ အဲဒီတော့မှ သံသယ၀င်သွားသည်။ ခြေအိတ်တောင်မှ မချွတ်မတော့ပဲ အိတ်ရှိရာသို့ လျှောက်သွားသည်။ တစ်ခုခုတော့ လွဲနေပါပြီ။ လွမ်းဝေသည် အိတ်ထိပ်က နံပါတ်ခလုတ်ကို လှည့်ကာ ဖွင့်သည်။“သား..ဘာဖြစ်လာလို့လဲ“လွမ်းဝေ၏
အမူအယာက ပြောင်းလဲသွားလို့ ဧည့်ခန်းဆက်တီတွင် ၀င်ကာထိုင်နေသည့် အမေဖြစ်သူက
စူးစမ်းသလိုမျိုးမေးသည်။ လွမ်းဝေသည် ရုတ်တရက်တော့ ပြန်မဖြေဖြစ်။ သူလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို လှည့်လိုက်သော်လဲ သော့က ထောက်ခနဲ ပွင့်မလာ။“ကိုကြီး …အိတ်မှားလာတာလား“လွမ်းဝေ အနားကိုရောက်လာသည့် ညီငယ်ကမေးသည်။ လွမ်းဝေသည် စိတ်ထဲတွင် ဇဝေဇ၀ါနှင့်…“အိတ်ကတော့
ဒီအိတ်ပဲကွ … ငါကလဲ အိတ်မှာ ဘာအမှတ်အသားမှ မလုပ်ထားမိဘူး …အခုနံပါတ်ကလဲ မရဘူးဆိုတော့ … မှားများမှားတာလား မသိဘူး .. ပြသနာပဲကွာ..“လွမ်းဝေသည် စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့် အိတ်ကိုမကာ ထောင်ကြည့်သည်။ အလေးချိန်က သူထည့်ခဲ့တာလောက် မရှိ …ပေါ့နေသည်ဟု ထင်ရသည်။ “ဗြိ..““အယ်.. ကိုကြီး …ဒီမှာ Wrapping Papers တွေ .. ဒါတွေက ကိုကြီးဟာလား“အိတ်ဘေးက
အပြင်ဇစ်ကိုဖွင့်ကာ ကြည့်လိုက်သည့် နွေနွေ၏ လက်ထဲက ရောင်စုံစက္ကူမျာကြောင့်
လွမ်းဝေတစ်ယောက် အိတ်မှားလာသည်ဆိုတာကို သေချာသွားစေသည်။
“အင်း… အိတ်မှားလာတာ သေချာသွားပြီ အမေရေ ..“လွမ်းဝေသည် အမေဖြစ်သူ ဒေါ်မြင့်မြင့်သူကို ကြည့်ကာ ပြောရင်း ဆက်တီတွင် ၀င်ထိုင်သည်။ သူသည် အခုထက်ထိ အိမ်ပေါ်တွင် ဖင်တောင်မှ ချမထိုင်ဖြစ်သေး။ ကျန်နေသေးသည့် ခြေအိတ်ကို ချွတ်သည်။“ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ..ကိုကြီး“ညီငယ် မြတ်သူက သူ့ဘေးတွင် ၀င်ထိုင်ရင်းမေးသည်။“ဘယ်လိုမှ
လုပ်မနေနဲ့ …သော့ဖြတ်ပြစ်ရမှာပဲ …ပလာယာသာ သွားရှာချည် ..အထဲမှာ လိပ်စာလေး ဘာလေးရရင်တော့ ကောင်းမှာပဲ … ကြည့်ရတာ ငါ့ရှေ့က ထွက်သွားတဲ့သူက မှားဆွဲသွားတာနေမှာပေါ့ .. ငါကတော့ မှားစရာမရှိဘူးလေ… နောက်ဆုံးမှ ထွက်တာဆိုတော့““ဒါဆို ထိုင်ဦး .. ညီမလေး ပလာယာ ယူပြီး ပြန်လာခဲ့မယ်…မောင်နှမတွေထဲမှာ
ဖင်အပေါ့ဆုံးဖြစ်သည့် နွေနွေကပင် နောက်ဘေးဘက်ပြေးဝင်သွားသည်။ မိန်းကလေးပီပီ သူမအကိုကြီး ဘယ်သူနှင့်မှားလာလဲ ဆိုတာကို စပ်စုချင်နေတာလဲ ပါမည်ထင်သည်။ သိပ်မကြာလိုက်။ ပလာယာ နှစ်လက်ကိုင်ကာ ပြန်ရောက်လာသည်။“ကဲ ..လာ ..ကိုလေးရေ .. ကြိုစားလိုက်ရအောင်“တော်သေးသည်။
လွမ်းဝေအိတ်က သိပ်အကောင်းဆုံး မဟုတ်သည့် ပိုလိုအိတ်မို့ ..သူ့အိတ်နှင့် အမျိုးအစားချင်းမတူသည့် အိတ်သည် မိနစ်ပိုင်းအနည်းငယ် အတွင်းတွင် သော့ပြုတ်ကာ ပွင့်သွားသည်။“အယ်… မိန်းကလေး အ၀တ်အစားတွေ ….ခိ..ခိ”အိတ်ထဲက
ပစ္စည်းတွေကို မြင်လိုက်သည်နှင့် နွေနွေ မျက်နှာက မျက်နှာပိုးမသတ်နိုင်ပဲ လွမ်းဝေကို ကြည့်ကာ ရယ်သည်။ မိန်းကလေး အ၀တ်အစားတွေမို့ မွှေနှောက်ဖို့ လက်တွန့်သွားသည့် လွမ်းဝေဘေးကို ရောက်လာကာ သူမက အားမနာတမ်းပင် နှိုက်သည်။“အလဲ့ … တယ်မိုက်ပါလား .. ဒီဇိုင်းက““ဟဲ့ ကောင်မလေး … အမေတွေ အကိုတွေ ရှိနေတယ်လေ .. အဲဒါတွေ ဘေးဖယ်ထားစမ်း“လွမ်းဝေသည်
ပြုံးစိစိလုပ်ကာ သူ့ကို မြှောက်ပြနေသည့် ညီမငယ် လက်ထဲက ပစ္စည်းကိုကြည့်ကာ ငေါက်လိုက်သည်။ မငေါက်လို့လဲ မဖြစ် … နွေနွေ ကိုင်ပြထားသည့်က အခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားသည့် ဇာပင်တီသေးသေးလေး။ အရောင်က အနက်ရောင်ဖြစ်ယုံမက ဒီဇိုင်းက အလယ်နေရာလေးတွင်သာ ပိတ်ကလေးနှင့် ဖုံးထားပြီး ကျန်သည့်နေရာများကတော့ ဇာတွေသာပါသည့် ဒီဇိုင်း။ အင်း ..ကြည့်ရတာ ခပ်ဟော့ဟော့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်နှင့် မှားလာတာ သေချာပါပြီ။ ဘာရယ်မဟုတ် ..လွမ်းဝေ၏ အတွေးထဲတွင် သူ့ရှေ့ ခုံက ထိုင်သွားသည့် ကောင်မလေးကို မြင်ယောင်သည်။နွေနွေသည် လွမ်းဝေဟောက်လိုက်တော့မှ မျက်နှာပိုးသတ်ကာ အပေါ်ယံတင်ထားသည့် အ၀တ်တွေကို ဘေးကိုချကာ ဖယ်လိုက်သည်။ အောက်က ပေါ်လာသည့် သတင်းစာ စက္ကူကို ဖယ်လိုက်သည်တွင် တွေ့လိုက်ရသည့်အရာတွေကြောင့် ဘေးနားက ကြည့်နေသူ လွမ်းဝေတို့ အံအားသင့်သွားသည်။ “အယ် .. လက်ဆောင်တွေပါလား … ခရစ်စမတ် လက်ဆောင်တွေ ထင်တယ်နော် .. ကိုကြီး … ပါကင်ပါ ထုတ်ထားတာ “လွမ်းဝေ
ဘေးနားက ရှိနေသည့် မြတ်သူက ပြောသည်။ အရောင်အသွေး မျိုးစုံလှသော ရွှေရောင် ငွေရောင် ပါကင်လေးတွေနှင့် ထုတ်ထားသည့် လက်ဆောင်သေးသေးလေးတွေသည် သေတ္တာအနှံ့တွင် ရှိနေသည်။“မနည်းပါလား .. သား..ရ … မင်း ညီပြောတာ မှန်လိမ့်မယ် … ခရစ်စမတ် အချိန်ဆိုတော့ ဟိုက ၀ယ်လာတာ ထင်တယ် … ကောင်မလေးလဲ .. စိတ်ရှုပ်နေလောက် ပြီ ထင်တယ် … ရှာစမ်းပါဦး .. လိပ်စာလေး ဘာလေးများ တွေ့မလားလို့ …“ဒေါ်မြင့်မြင့်သူ၏ မှတ်ချက်အဆုံးတွင် ခုနတုန်းက လက်မရဲသည့် လွမ်းဝေသည် အိတ်ထဲကို မွှေနှောက်သာ ရှာသည်။ နွေနွေနှင့် မြတ်သူက အိတ်ထဲက လက်ဆောင်လေးတွေကို ထုတ်ကာ ဘေးတွင် ပုံထားသည်။ ဟင် .. ဒီမှာ စာအိတ်တစ်အိတ်ပါလား ..လွမ်းဝေသည် သေတ္တာအောက်ထောင့်က စာအိတ်တစ်ခုကို
တွေ့သည်နှင့် ထုတ်ကာ ဆွဲကြည့်သည်။ ”ကို စိုးနိုင် 09xxxxxxxx ..အင်း.. ဒါ
လူကြုံနဲ့ ပစ္စည်းပေးလိုက်တာ ဖြစ်ရမယ် ““ကိုလေး ..မင်းဖုန်းပေးစမ်း .. ငါဆက်ကြည့်လိုက်မယ် “လွမ်းဝေ တွက်ဆချက်က မှန်သည်ဟု ပြောရမည်။ ဖုန်းထဲက ကိုစိုးနိုင်ဆိုသူ၏ စကားသံက သက်သေခံနေသည်။“ကျနော့်
ကို လူကြုံ ပေးလိုက်တာ စနိုးလို့ ခေါ်တယ်ပြောတယ် ..အကို …နေတာက အင်းစိန်ဘက်မှာ အကို ..လိပ်စာတော့ ကျနော့်ဆီမှာ မရှိဘူး အကို …ဖုန်းတော့ရှိတယ် … ကျနော်ပေးမယ် “လွမ်းဝေလဲ ကိုစိုးနိုင်ကို ကျေးဇူးတင်စကား ကမန်းကတမ်းပြောကာ အမေဖြစ်သူ လိုက်ရေးထားသည့် နံပါတ်ကို အမြန်ပင် နှိပ်သည်။ “ဟယ်လို … စနိုးတို့ အိမ်ကလား မသိဘူး““ဟုတ်ပါတယ် .. စနိုးရေ ..နီ ဖုန်းတဲ့“သိပ်မကြာလိုက်။ ဖုန်းထဲကနေ မိန်းကလေး တစ်ယောက်၏ အသံကို ကြားရသည်။ အသံလေးက ငယ်ငယ်မို့ ကြည့်ရတာ ကောင်မငယ်လေးဖြစ်ရမည် ထင်သည်။ “စနိုးပါ … ဘယ်သူများလဲ မသိဘူး““ဟုတ်ကဲ … ကျနော် ဒီနေ့မှ စလုံးက ရောက်တာပါ … ဟိုလေ … အဲဒီက ညီမများ အိတ်မှားသွားလားလို့““အယ် … မာမီရေ … အိတ်ပြန်တွေ့ပြီ …မဖွင့်နဲ့တော့ “ကောင်မလေး၏ ရွှင်မြူးတက်ကြွစွာ သူ့အမေဖြစ်သူကို အော်ခေါ်သံကြားမှ လွမ်းဝေ သက်ပြင်းချနိုင်သည်။ “ဟုတ်
….ဟုတ်ပါတယ် အကို …. စနိုး အိတ်မှားဆွဲသွားမိတယ် … အိမ်ရောက်ချင်ဇောနဲ့ မို့ လောလောလောလော ထွက်သွားတာ … အခု ဒီရောက်မှဖွင့်လို့ မရ ဖြစ်တော့မှ မှားမှန်း သိတာ ““ဒါနဲ့ .. စနိုး ဖုန်းကို ဘယ်လိုရလဲ မသိဘူး“လွမ်းဝေလဲ အဲဒီတော့မှ ရှင်းပြမိသည်။“အော်
.. ညီမ .. စိတ်တော့ မဆိုးနဲ့ .. အကို အိတ်ကို ဖွင့်လိုက်ရတယ် … အထဲကနေ ကိုစိုးနိုင် လိပ်စာတွေ့လို့ သူ့ဆီကနေ တဆင့် ညီမဖုန်းကို ရတာ …သူက ညီမကို လူကြုံပေးလိုက်တယ်ဆိုတာလေ… အဲဒါ““အယ် .. ရပါတယ် အကို … စနိုးက ခရစ်စမတ်အတွက် အလှဆင်ဖို့ လက်ဆောင်တွေ ကြိုးစားပမ်းစား ၀ယ်လာပြီး အဲဒါတွေ ကုန်ပါပြီ ဆိုပြီး ငိုတောင် ငိုမိတော့မလို့ .. ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်.. ဒါနဲ့ ..“လွမ်းဝေလဲ ကောင်မလေးက ဘာဆိုလိုချင်မှန်း သိသည်နှင့် ..“ကျနော့် လိပ်စာပေးပါလား … အခု အိတ်လာလဲလိုက်မယ်လေ ““ဟုတ်ကဲ့ ..ကျေးဇူးပါပဲနော် …အကို .. လိပ်စာက ….“ထို့နောက်တွင်တော့
လွမ်းဝေသည် ညီဖြစ်သူ မြတ်သူနှင့်ပင် အင်းစိန်ဘက်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ ညီမငယ်
နွေနွေက လိုက်လာချင်သော်လဲ လွမ်းဝေက ရှုတ်သည်ဆိုကာ အိမ်မှာပဲထားခဲ့သည်။ မလိုက်ရသဖြင့် အိမ်ပေါက်ဝတွင် ခါးထောက်ကာ ကျန်ခဲ့ရင်းသူ့ကို လှမ်းနောက်လိုက်သည့် ညီမငယ်စကားကို ပြန်ကြားယောင်မိရင်း သူပြုံးတောင်ပြုံးမိသည်။“ကိုကြီးရေ .. ဇာတ်လမ်းနော် …မမလား .. ညီမလေးလားတော့ မသိဘူး .. ယောင်းမကို မြင်ဖူးချင်လိုက်တာ… အ ဟိ..“
အိမ်ကလေးက တစ်ထပ်တိုက်ကလေး ဖြစ်ကာ တော်တော်သပ်သပ်ရပ်လေးရှိလှသည်။ အိမ်ရှေ့တွင်လဲ ခြံကလေးလို မြေကွက်လပ်လေး ရှိသည်။ လွမ်းဝေသည် မြတ်သူနှင့် အတူ ခြံတခါး အပြာရောင်လေးရှေ့တွင် ရပ်ကာ လူခေါ်ခေါင်းလေးကို ဆွဲလိုက်သည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ အိမ်ထဲကနေ ကောင်မလေးတစ်ယောက် လှမ်းကြည့်သည်ကို တွေ့ရသည်။“စနိုးတို့ အိမ်လား မသိဘူး …“လွမ်းဝေ၏
အော်ပြောသံတွင် ပထမကောင်မလေး နားသို့ နောက်ထပ် ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရောက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ လွမ်းဝေသည် ခြံတခါးနှင့် အိမ်က အနည်းငယ် လှမ်းနေသဖြင့် လူလုံးမသဲကွဲသော်လည်း ၀တ်ပုံစားပုံကိုကြည့်ကာ ရင်တွေဒိတ်ခနဲ ခုန်သည်။ ဟင်.. ဒီကောင်မလေးက …။ ဟုတ်ပါသည်။ လွမ်းဝေ အထင်မမှားပါ။ အိမ်ထဲကနေ ခြံတံခါးကို မနှေးမမြန် လျှောက်လာသည့် ကောင်မလေးက လေဆိပ်မှာတုန်းက သူငမ်းခဲ့သည့် ကောင်မလေးပင်။ သူမလေးသည် သူ့လိုပင် အ၀တ်အစားတောင် မလဲရသေး။ လေဆိပ်မှာ တွေ့ခဲ့သည် အတိုင်းပင်။ မမှတ်မိစရာ မရှိပါဘူး 24F လေးရေ ။ အော်.. သူက စနိုးတဲ့လား။ကောင်မလေးသည် ဒီတစ်ခေါက်အတွေ့တွင်တော့ လေဆိပ်တုန်းကလို မဟုတ်ပေ။ မျက်နှာက ရှုတည်တည်မဟုတ်ပဲ လွမ်းဝေကို ပြုံးကာ ပြရင်း တံခါးကို ဖွင့်ပေးသည်။ အိမ်ပေါက်ဝတွင်လဲ ကျန်ခဲ့သည့် ကောင်မလေးအပြင် ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်နှင့် အဒေါ်ကြီး တစ်ယောက်ရပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကြည့်ရတာ အဖေနှင့် အမေ ဖြစ်ဟန်တူသည်။“ကျနော့် နာမည် လွမ်းဝေပါ … ဒါကတော့ ကျနော့် ညီ မြတ်သူ ပါ .. ကျနော်တို့က ကျောက်တံတား ဘက်မှာ နေပါတယ် ..“လွမ်းဝေသည် အိမ်ထဲထိုင်မိသည့် နောက် သူကပင် စတင်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ လူကြီးက ကုလားထိုင်မှာ ၀င်ထိုင်ရင်း …“အေး
..အေး …မောင်လွမ်းဝေက… ဆက်သွယ်လာတာ ကျေးဇူးပဲလို့ ပြောရမယ် … ဦးတို့က .. ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတာ .. မောင်လွမ်းဝေ ဆက်လာတုန်းက အိတ်ဖွင့်ဖို့ တိုင်ပင်နေကြတုန်း ရှိသေးတယ် …ဦး နာမည်က အောင်မိုးပါ““ဟုတ်တယ် ..အကို ..စနိုးက ..ခရစ်စမတ်အတွက် ၀ယ်လာတဲ့ လက်ဆောင်တွေတော့ သွားပြီဆိုပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတာ.. တော်သေးတယ် “အခုမှပဲ
ကောင်မလေး၏ နှုတ်ဖျားမှ စကားသံ ထွက်လာသည်။ ဒီကောင်မလေးသည် အရင်ဘ၀က ဆုတောင်းကောင်းခဲ့သည်ထင်သည်။ ရုပ်ရည်တွင်မက အသံလေးကလဲ ချိုမြလှသည်။ “သောက်လိုက်ပါဦး …မောင်ရင် … တကူးတက လာပေးရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ““ဟုတ်ကဲ့ပါ .. ဒေါ်ဒေါ် ..“အစောပိုင်းက
အမျိုးသမီးကြီးနှင့် ခုနတုန်းက စနိုးနှင့် တွဲရပ်နေသည့် ကောင်မလေးက အအေးခွက်နှင့် မုန့်ကို ကိုင်ကာ နောက်ဘေးကနေ ပြန်ထွက်လာသည်။ လွမ်းဝေသည် လေဆိပ်က ရောက်ကတည်းက ရေတောင် မသောက်ဖြစ်သေးသည်မို့ စားပွဲပင် တင်လိုက်သည့် အအေးခွက်လှလှလေးဆီသို့ လက်လှမ်းလိုက်သည်။ “အော် …မေ့နေလို့ မိတ်မဆက်ဖြစ်ဘူး …စနိုးနာမည် အရင်းက နှင်းနှင်းပါ … ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက စနိုးလို့ ဒက်ဒီတို့က ခေါ်လို့ ဒီအတိုင်းပဲ ပြောဖြစ်နေတာ .. ဒါက စနိုး အစ်မ ၀မ်းကွဲပါ …မကေတဲ့ .. အမေ့နာမည်ကတော့ ဒေါ်နှင်းလွင်ပါ.. ““ဟုတ်တယ်
..မောင်လွမ်းဝေ … ဦးတို့က သားသမီး များများစားစား မရှိဘူး … ဒီသမီး တစ်ယောက်တည်း ရှိတာ . အမှန်ဆိုလွှတ်ချင်တာတောင် ဟုတ်ဘူး .. စလုံးကိုလေ… သူက အတင်းကျောင်းတက်ချင်တယ် ပြောလို့သာ လွှတ်ရတာ ..”လွမ်းဝေလဲ ဦးအောင်မိုး၏ စကားတွင် ဘာရယ်မဟုတ် ခေါင်းအလိုလိုငြိမ့်မိသည်။ ဟုတ်ရှာမှာပဲလေ။ သူတို့ခမျာ သမီးတစ်ယောက်တည်းဆိုတော့။ ဘာမှတော့ ထုတ်မပြောချေ။“စနိုးက .. အ၀တ်အစားတွေ ပါသွားတာကို ပြသနာမရှိဘူး … ခရစ်စမတ်အတွက် ၀ယ်လာတာတွေ ပါသွားတယ်ဆိုပြီး ၀မ်းနည်းနေတာ“လွမ်းဝေသည်
ကောင်မလေး၏ ၀င်ပြောသံတွင်မှ သတိရကာ အိမ်ကို လှည့်အကဲခတ်ကြည့်သည်။ ထင်သည့်အတိုင်း ဘုရားစင်မရှိသည်ကို တွေ့သည်။ သူ့အတွေးကို ပိုသေချာသွားစေသည်က ဧည့်ခန်းခေါင်းရင်းဘက်က တီဗီဘေးတွင် ထောင်ထားသော ထင်းရှုးပင်ကြီးကြောင့်ပင်။ အစစ်လား အတုလားတော့ မသိ။ ဒါပေမယ့် အပင်တွင် ဘာမှ
မယ်မယ်ရရ ချိတ်ထားတာ မတွေ့။ဦးအောင်မိုးက လွမ်းဝေ ဘာကို အကဲခတ်နေသည်ဆိုတာကို သိလို့ထင်သည်။“ဟုတ်တယ်
… မောင်လွမ်းဝေ .. ဦးတို့က Christians တွေလေ … သမီးက ခရစ်စမတ်အတွက် ၀ယ်လာမယ်ပြောလို့ …ဦးတို့တောင် အပင်မှာ ချိတ်ဖို့ ဘာမှ မစီစဉ်ထားတာ….အော် ဒါနဲ့ ..သမီး. မောင်လွမ်းဝေတို့ကို ဖိတ်လိုက်လေ…““အယ် ..ဟုတ်သားပဲ ..စနိုး မေ့နေလို့ … ခရစ်စမတ်နေ့ကျရင် ..လာခဲ့ပါလား အကို …. အိမ်မှာ ပါတီ အသေးလေး လုပ်မလို့လေ …ခင်မင်ရာ လူတွေကို စုပြီးတော့လေ… ညနေဘက် ..ခနတဖြုတ်ပေါ့“လွမ်းဝေလဲ စနိုးဆိုသည့် မိန်းမချောလေး၏ ဖိတ်ခေါ်မှုတွင် ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကျဆိုသလို ဖြစ်သည်။ ကံကြမ္မာဖန်လာလို့ တခါပြန်၍ လာဆုံဆည်းရသည့် စနိုးဆိုသည့် ကောင်မငယ်လေးကို အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း သူက တွယ်တာမိသလိုမျိုး ဖြစ်နေသည် မဟုတ်လား။ စနိုးကလဲ မြင်သူတကာငေးလောက်သည့် ကောင်မလေးဆိုတော့ သူနှစ်သက်မိတာ အဆန်းမဟုတ်လား။ သူစိတ်ထဲတွင် ဒီကောင်မလေးကို တွေ့ချင်နေသေးသည်။“ဟုတ်ကဲ့ ..လာခဲ့ပါ့မယ် …““ကဲ … ကျနော်တို့ကိုလဲ ပြန်ခွင့်ပြုပါဦး … အိတ်ကတော့ ကျနော် နောက်မှပဲ အစားပြန်လျော်ပေးပါ့မယ် ““အို.. မဟုတ်တာ“စကားသံတွေက
တမိသားစုလုံးလိုလို အပြိုင်ထွက်သည်။ စနိုးရော၊ သူမ အမေရော ကပါ တပြိုင်တည်း
လိုလိုပင်။ ဦးအောင်မိုးက လက်ကာပြသည်။ ဒေါ်နှင်းလွင်က ဆက်တော့မပြောပါ။ စနိုးကပင် ဆက်၍..“မလုပ်ပါနဲ့ …အကို..တကယ်ဆို … စနိုးက မှားဆွဲသွားလို့ ဖြစ်တာပါ … နောက်ပြီတော့ အိမ်မှာလဲ အိတ်အပို ရှိပါသေးတယ် အကို ..ပြန်မပေးပါနဲ့ …. တကူးတကလာပြီး ပြန်ပို့တာကိုသာ စနိုးတို့က ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ ..““25 ရက်နေ့ကျရင်သာ .. လာဖြစ်အောင် လာခဲ့ပါနော် …““လာမယ် … ညီမ ..စိတ်ချ … လာခဲ့မယ်.. ဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်“လွမ်းဝေလဲ
လာမယ်တွေ တသီကြီးထပ်ကာ ကောင်မလေးကို ကတိပေးလိုက်ရင်း ထိုင်နေရမှာထ ..အိတ်ကိုဆွဲကာ အိမ်ထဲကနေ ညီငယ်ဖြစ်သူနှင့် ထွက်လာခဲ့သည်။ အိတ်ကပဲ လေးနေလို့လားမသိ။ သူ့စိတ်ထဲတွင် စနိုးတို့အိမ်က မနည်းပင် ခြေလှမ်းတွေကို သယ်ကာ ထွက်လာလိုက်ရသည်။ ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ဗဟိုသည် ဒီကောင်မလေး အိမ်အောက်မှာ အခြေခံထားလို့လား။ အလိုလို ဆွဲငင်အားတွေက များနေသည်ဟု ခံစားရသည်။ကားထဲဝင်ထိုင်မိသည်နှင့်
မြတ်သူသည် ဘာမှပြောမနေပဲ တချိုးတည်းကို မောင်းထွက်လာခဲ့သည်။ လွမ်းဝေသာလျှင် အိမ်ပေါက်ဝအထိ လိုက်ပို့သည့် ကောင်မလေးကို ကားနောက်ကြည့်မှန်ထဲကနေ လှမ်းကြည့်ကာ တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလျှင်ပင် ရောက်တော့မည့် ခရစ်စမတ်နေ့ကို မြန်မြန်ရောက်ချင်နေမိသည်။လမ်းသွယ်လေးက ထွက်၍ အင်းစိန်လမ်းမကြီးအရောက်တွင် မြတ်သူက အလာတုန်းက ဖွင့်ခဲ့သည့် Ciy FM ကိုပင်ဆက်ဖွင့်သည်။လွမ်းဝေ၏ နားထဲတွင် ကဗျာဘွဲ့မှုး၏ အသံချိုချိုလေးက ပျံ့ လွင့်လာသည်။ “နင် တကယ်ခင်ရင် လာခဲ့ပေါ့လို့ ပြောတဲ့ ခရစ်စမတ်မှာ .. ခရစ်စမတ်ကတ် လှလှလေးတောင် ခုတော့ ဟောင်းနေပြီ” …“အင်း … ကိုယ်ကတော့ မဟောင်းချင်ပါသေးပါဘူး … အခုမှ စမိယုံပဲ ရှိပါသေးတယ်” လွမ်းဝေသည် အတွေးနှင့်အတူ သူ့နှလုံးသားက အနည်းငယ်နွေးသွားသည်ဟု ခံစားမိလိုက်ရတော့သည်။
အိမ်ကလေးနှင့် နီးလာသည်နှင့် အမျှ လွမ်းဝေ၏ ရင်သည်ပို၍ လှုပ်ရှားလာသည်။ အမှတ်မထင် ဆုံစည်းခဲ့ရသည့် နေ့ကစ၍ သူသည် ဒီကောင်မလေးကို မမေ့နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရသည် မဟုတ်လား။ စားလဲဒီစိတ် ၊ သွားလဲဒီစိတ်လို့ ပြောလို့မရသော်လဲ သူမ၏ မျက်နှာလှလှလေးနှင့် အချိုးကျကျလှပသည့် ခန္ဓာကိုယ်ကလေးက သူ့စိတ်ကူးထဲတွင်တော့ အချိန်တော်တော်များများ၌ တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေသည်သာ။ ဖုန်းဆက်ရကောင်းမလား ဟု စဉ်းစားမိသည်ကလဲ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါပင်။ နောက်ဆုံးမှ တနင်္ဂနွေနေ့ကို စောင့်တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာပင် မိသားစုနှင့် အချိန်ဖြုန်းနေလိုက်ရသည်။“ကိုကြီး … ကားကို ဒီမှာပဲ ရပ်ခဲ့လိုက်မယ်..“အတူပါလာသည့်
ညီဖြစ်သူ မြတ်သူ၏ စကားတွင် လွမ်းဝေလဲ ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သည်။ စနိုးတို့ အိမ်ရှေ့တွင်ရှိသည့် မြေကွက်လပ်ကလေးတွင် အပြင်ကလာသည့် ကားနှစ်စီးက ရပ်ထားသဖြင့် နေရာလွတ် မရှိ။ မြတ်သူက ကားကို နှစ်အိမ်ကျော်က အိမ်ရှေ့တွင် အိမ်ပေါက်ဝနှင့်လွှဲကာ ကပ်ရပ်သည်။ လွမ်းဝေသည် အမှတ်တရဆိုကာ စနိုးအတွက်ဝယ်လာသည့် ခရစ်စမတ်ကတ်ကလေးကို ယူကာ မြတ်သူနှင့် အတူလျှောက်လာခဲ့သည်။ အိမ်ခြံတံခါးက ပထမနေ့က လာသလိုမျိုး ပိတ်ထားသည် မဟုတ်ပဲ
ဖွင့်ထားသည်မို့ ဒီအတိုင်းပဲ လျှောက်ဝင်လာခဲ့သည်။“အကို လွမ်းဝေတို့လာတယ် .. ဒက်ဒီ ““လာပါ.. အကို … စနိုးက မျှော်တောင်မျှော်နေတာ“လွမ်းဝေသည်
အိမ်ပေါက်ဝက ပေါ်လာသည့် အလှနတ်သမီးလေးကို သတိလက်လွတ်ပင်ငေးနေမိသည်။ လှလိုက်တာ စနိုးရယ်။ ကောင်မလေးသည် နာမည်နှင့် လိုက်အောင် အဖြူရောင်လွလွ ဂါဝန်လေးကို ၀တ်ကာထားသည်။ ကြိုးတစ်ချောင်း ဂါဝန်လေးမို့ ၀င်းမွတ်နေသော ရင်ညွန့်သားလေးက ထွန်းထားသည့် ဧည့်ခန်းမီးရောင် အောက်တွင် ၀င်းမှည့်စွာ အလှကို လှစ်ဟနေသည်။ လွမ်းဝေသည် ညီဖြစ်သူ မြတ်သူက သူ့ကို တံတောင်နှင့် ထိုးကာ သတိပေးမှ အသိပြန်ဝင်သည်။“အကိုတို့က စောများစောနေလားလို့ ““မစောပါဘူး
…အကို … စနိုးတို့ကလဲ ဘယ်သူမှ သိပ်မဖိတ်လို့ လူမရှိတာလေ …. လာအကို .. စနိုးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ် .. ခနနေရင်… အခန်းအနားစတော့မှာ..““ဟုတ်ကဲ့ .. ..အော်.. စနိုး … ဒီမှာ ခရစ်စမတ်လက်ဆောင် …Merry Christams ပါ ““Thanks အကို … Same to you နော် “လွမ်းဝေသည်
ခရစ်စမတ်ကတ်ကို ပေးလိုက်ပြီးနောက် စနိုးနှင့်အတူ ခေါင်းရင်းဘက်သို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။ ပထမတခါတုန်းက ဘာမှ မချိတ်ရသေးသော ထင်းရှုးပင်ကြီးတွင် စနိုးဝယ်လာသည့် လက်ဆောင်လေးတွေက အစီအရီနှင့် ချိတ်ကာ ဆွဲထားသည်။ ဦးအောင်မိုးကိုတော့ လူကြီးဝိုင်းတွင် တွေ့လိုက်သဖြင့် လှမ်းကာ ပြံူးပြနှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ စနိုး၏ သူငယ်ချင်းတွေက သိပ်တော့မများချေ။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နှင့် မိန်းကလေးနှစ်ယောက်သာ ရှိသည်။ မိတ်ဆက်ပြီးမှ ယောက်ျားလေးနှင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်က အတွဲဟု သိလိုက်ရသဖြင့် လွမ်းဝေ စိတ်ပေါ့သွားသည်။ အင်း … သူသံယောဇဉ်တွယ်မိနေသည့် ကောင်မလေးသည် ဒီမှာတော့ ရည်းစားရှိဟန်မတူ။ စလုံးမှာရော …။လွမ်းဝေတို့ဝိုင်းသည် လူသိပ်မရှိချေ။ စနိုးသူငယ်ချင်းတွေနှင့် သူတို့ ညီအကို နှစ်ယောက်သာရှိသည်။ စနိုးကလဲ တခြားဝိုင်းကို မသွားချေ။ သူတို့ဝိုင်းတွင်သာ ၀င်၍ စကားစမြည်ပြောသည်။ လွမ်းဝေသည် ဒါကို ကျိတ်၍ ကျေနပ်မိသည်။ သူ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က သူမလေးဆီမှ ခင်မင်မှု ရဖို့ပင် မဟုတ်လား။ လူငယ် လူငယ်ချင်းမို့ ၀ိုင်းက လူအချင်းချင်း ခနပိုင်းအတွင်းတွင် ရင်းနှီးသွားသည်။ လွမ်းဝေတို့ ရောက်ပြီး သိပ်မကြာ။ ဦးအောင်မိုးတို့ ၀ိုင်းက လူကြီးတစ်ယောက်က မတ်တပ်ရပ်ကာ ခရစ်စမတ်၏ အနှစ်သာရနှင့် ဆုတောင်းစကားကို ပြောသည်။ လွမ်းဝေလဲ ကိုယ့်ဘာသာမဟုတ်ပေမယ့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် စကားများမို့ လေးလေးနက်နက်ပင် နားထောင်နေမိသည်။ စနိုးက သူ့ကို တစ်ချက်တစ်ချက် လှမ်းကြည့်သည်ကို သူသတိပြုမိသည်။ အော်.. ကောင်မလေးရယ် .. တကယ်တမ်းကျတော့ လူသားအားလုံးဟာ ကောင်းကင်မိုးသားအောက်မှာ အတူတူနေကြတာပါပဲကွယ် … ဘာသာမတူပေမယ့် …ရင်ခုန်သံတူဖို့သာ အရေးကြီးတာပါကွယ် …ထို့နောက်တွင်တော့
အကျွေးအမွေး စသည်။ ဒါကတော့ စနိုးပြီးလျှင် ဒုတိယ လွမ်းဝေ စိတ်ဝင်စားသည့် အကြောင်းအရာ။ ဒေါ်နှင်းလွင် ကိုယ်တိုင်ချက်သည်ဆိုသည့် ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲကို နှစ်ပွဲ တိတိအားပေးရင်း သူတို့တွေ ဟိုအကြောင်း ။ ဒီအကြောင်း သောင်းပြောင်းစုံအောင် ပြောမိကြသည်။ တစ်ဖက်က လူကြီးဝိုင်းက မြောက်ကိုရီးယား
ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီလ်အကြောင်း ပြောနေချိန်တွင် သူတို့လဲပဲ ဒီနှစ်အကယ်ဒမီ ရွေးပွဲအကြောင်း ပြောနေမိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ရိပ်မိလား မရိပ်မိလားတော့ မသိ။ လွမ်းဝေသည် ဘေးနားက စနိုး၏ မျက်နှာလှလှလေးကို ငေးကြည့်နေမိသည်က အချိန်တော်တော်များများပင်။ သူမကလဲ တစ်ချက်တစ်ချက် မျက်လွှာလေးပင့်ကာ ပြန်ပြန်ကြည့်နေသည်သာ။ အကြည့်ချင်းဆုံရင် ရင်ခုန်သည်ဆိုတော့ လွမ်းဝေ၏ နှလုံးသားသည် လှုပ်ခါနေမိသည်လေ။ အင်း .. သူဒီကောင်မလေးကို အချိန်တို အတွင်းမှာ သူသံယောဇဉ်တွယ်မိနေပြီ ..ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ။မည်မျှတောင် စကားကောင်းနေကြသည်တော့ လွမ်းဝေ သတိမထားမိပါ။ ဒါမှမဟုတ် သူကပဲ အချိန်တွေက ရွေ့ လျားတတ်သည်ဆိုတာကို မေ့သွားလို့လား မသိပါ။ သူ့ဘေးနားက လူတွေ အလျှိအလျှိ ပြန်ကုန်ကျမှ သူလဲပဲ ပြန်ဖို့ သတိရသည်။ သူတို့ ထိုင်စကားပြောနေသည်မှာလဲ တော်တော်ကြာနေပြီ မဟုတ်လား။ မခွဲချင် မပြန်ချင်သေးပေမယ့် မကောင်းတတ်ပြီမို့ လွမ်းဝေသည် ညီဖြစ်သူ မြတ်သူဘက်လှည့်ကာ လက်တို့လိုက်ရင်း ထိုင်ရာမှထသည်။ “အကိုတို့ ပြန်ဦးမယ် … ““ဟုတ်.. ဟုတ်ကဲ့ အကို“စနိုးသည်
လွမ်းဝေနှင့် အတူထိုင်နေရာမှထသည်။ လွမ်းဝေနှင့် မြတ်သူလဲ တစ်အိမ်သားလုံးကို နှုတ်ဆက်ကာ ထွက်လာခဲ့သည်။ အလိုက်သိသည့် ညီငယ်သည် သူတို့အရင် ရှေ့ကနေ ခပ်သုတ်သုတ်နှင့် လျှောက်ကာထွက်သွားသည်။ လွမ်းဝေနှင့် စနိုးသည် ခြံဝလေးတွင် ခနရပ်မိကြသည်။“ခရစ်စမတ်ကို ဖိတ်ခေါ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ … ခင်မင်ခွင့်ရတဲ့ အတွက်လဲ ၀မ်းသာပါတယ် ““ဟုတ်
.. ဟုတ်ကဲ့ .. စနိုးကလဲ ၀မ်းသာပါတယ် .. အမှန်အတိုင်းပြောရရင် .. စနိုးမှာကလဲ အပေါင်းအသင်း သိပ်ရှိတာ မဟုတ်ဘူး .. စလုံးရောက်ရင်လဲ ခေါ်နိုင်ပြောနိုင်ပါတယ် “အမှောင်ထဲတွင်ပင် မျက်နှာလေးက ၀င်းနေသည့် မိန်းမလှလေးကို ကြည့်ကာ လွမ်းဝေတစ်ယောက် “ကြောက်ရင်လွဲ ရဲရင် မင်းဖြစ်ကွာ” ဆိုကာ အရဲစွန့်၍ စကားဆိုမိသည်။“စနိုးလက်ခံမယ်ဆိုရင် .. အကိုက …တဖန်ပြန်ပြီး မုန့်ကျွေးပါရစေ …တကယ်လို့များ စနိုး အကိုနဲ့သွားတာကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ့်လူ မရှိဘူး ဆိုရင်ပေါ့ ““အယ်.. အကိုက စကားနှိုက်နေတာ ထင်တယ် .. ဟိ ..ဟိ“စနိုး၏ မျက်နှာသည် ခပ်မြူးမြူးလေးနှင့် ပြုံးသွားသည်။ အပြုံးလေးနှင့်ပင်…“စနိုးက ပွင့်လင်းပါတယ် အကို… စနိုးမှာ ရည်းစားမရှိဘူး … မုန့်ကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့ စားဖို့ အသင့်ပဲ … ဖုန်းဆက်လိုက်လေ အကို..“လွမ်းဝေခမျာ ပျော်လိုက်သည့် ဖြစ်ချင်း။ သူမလေး၏ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစကားက သူ့အတွက် ရှေ့အလားအလာကောင်းသွားသည် မဟုတ်လား။“အိုကေပါ .. စနိုး… ဒါဆို အကို ဖုန်းဆက်မယ်နော် …အကိုက တခြားဆက်သူများ ရှိမလားလို့ အားနာနေတာ““ရပါတယ် အကို… စနိုးကိုသာ မေးနေတာ …အကိုကရော တခြားသွားစရာ လူတွေ ဘာတွေရှိနေဦးမယ်နော်““အာ..မရှိပါဘူး … ရှိချင်နေလို့ ခေါ်နေတာပေါ့ …ဟင်း..ဟင်း““အလဲ့.. လိုက်ရမှာတောင် ကြောက်လာပြီနော် …ဟိ ..ဟိ“လွမ်းဝေ၏
မထိတထိစကားတွင် ကောင်မလေးသည် မျက်နှာပျက်မသွားချေ။ လက်သည်းကလေးကို ကိုက်ကာ
သူ့ကို မခို့တရို့ကြည့်ရင်း ရယ်နေသည်။ လွမ်းဝေလဲ ဒီလောက်ဆိုရင် အခြေအနေမဆိုးလို့ တွက်ကာ စနိုးကို နှုတ်ဆက်ရင်း လှည့်ထွက်လာခဲ့တော့သည်။ သူ့ဘ၀အတွက်တော့ မှတ်မှတ်ရရ ခရစ်စမတ်ညလေးပင်။
ကောင်မလေးရယ်ဘာဖြစ်လို့များ ဒီဇင်ဘာဟာ အေးမြနေရမယ့် အစားကိုယ့်နှလုံးသားကို နွေးထွေးစေနေပါလိမ့် …ဒါဟာ အချစ်ကြောင့် ဆိုရင်တော့ … ဒီ temperature လေးမှာတင် ရပ်နေပါရစေ ..ဒီထက်တော့ ရင်ကို မပူလောင်ပါရစေနဲ့ကွယ် … နှင်းပွင့်လေးရေ…ကိုယ့်ရင်ခွင်ရဲ့ အပူချိန်ကို မင်းသာလျှင် ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် ကွယ် …
“စားလို့ကောင်းလား စနိုး““ကောင်းတယ် အကို … စနိုးက ဘဲကင်ကြိုက်တယ် … ဒါပေမယ့် စလုံးက ဘဲကင်က စားလို့မကောင်းဘူး .. ဒီက ဘဲကင်ကို စားချင်နေတာ အတော်ပဲ ဖြစ်သွားတယ် “လွမ်းဝေသည် ဟန်မဆောင်ပဲ ပွင့်လင်းစွာပြောနေသည့် နံဘေးက မိန်းမလှလေးကို ကြည့်ကာပြုံးသည်။ အင်း…စားပြီးပြီ ဆိုမှတော့… သူ ဒီကောင်မလေးကို အိမ်ပြန်ပို့ရမှာလား .. ဒါမှမဟုတ် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို အပြေးအလွှား အကြံထုတ်နေမိသည်။ လွမ်းဝေနှင့် စနိုးသည် မုန့်ထွက်စားရအောင် ဆိုကာ ချိန်းပြီးတော့ ရှစ်မိုင်က
ရွှေဘဲကို ရောက်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်သည် ခရစ်စမတ်ပြီးကတည်းက နေ့တိုင်းလိုလိုကို ဖုန်းပြောဖြစ်သည်။ အစပိုင်းရက်တွင်တော့ လွမ်းဝေက စဆက်တာဖြစ်ပြီး နောက်ရက်တွေတွင်တော့ စနိုးကပါ ဆက်လာသည်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဌာနသည် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အမြတ်အစွန်းရသည်ဆိုလျှင် သူတို့နှစ်ယောက် ပံ့ပိုးမှုကြောင့်ဟု အဖြေထွက်မည်ထင်သည်။ ဒီနေ့တော့ သန်ဘက်ခါဆိုရင် လွမ်းဝေက ပြန်ရတော့မည်မို့ မပြန်ခင် မုန့်ထွက်စားရအောင်လို့
ချိန်းကာ သူတို့နှစ်ယောက် ရွှေဘဲကို ရောက်လာကြချင်းသာ။ စနိုးကလဲ ဘဲကင် ကြိုက်သည်ဆိုတော့ အဆင်ပြေလိုက်သည့် ဖြစ်ချင်း။ လွမ်းဝေတို့ ရောက်တုန်းကတော့
ကြားရက်မို့လို့ ထင်သည် ၊ လူအနည်းငယ် ရှင်းကာ သူတို့နှစ်ဦး အေးအေးဆေးဆေး စားသောက်လို့ရသည်။ ဒါတောင်မှ အခုစားပြီးသောက်ပြီး ညနေစောင်းရောက်တော့ လူတွေက လာလိုက်ကျသည်မှာ မနည်းချေ။လွမ်းဝေသည် ကားတံခါးကို ဖွင့်ပြီးနောက် စက်မနိုးဖြစ်သေးပဲ စနိုးကို ကြည့်သည်။ ဒီကောင်မလေးသည် ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် လှနေသည်သာ။ ခုနလဲ ဆိုင်ထဲက ၀ိတ်တာ ကောင်ကလေးတွေက သူမကို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် ငေးနေတာကို သူသတိထားမိသည်။ မငေးပဲလဲ ခံနိုင်ရိုးလား။ စနိုးသည် ဒီနေ့တော့ အ၀ါနုရောင် အပေါ်အောက်တဆက်တည်းဖြစ်သည့် ဂါဝန်ကားကားလေးကို ၀တ်ကာထားသည်။ ဒီကောင်မလေးသည် ဒါတွေချည်းပဲ ရှိတာလား။ တခြားဟာကိုပဲ မ၀တ်တတ်တာလားတော့ မသိ။ အခု ဂါဝန်ကလဲ ကြိုးတစ်ချောင်း ပုခုံးအပြတ်ပင်။ မွတ်လျနေသော ပုခုံးသားလေးများက ဖြူဝင်းစွာထွက်ပေါ်နေသလို တင်းမို့နေသည့် ရင်နှစ်မွှာက ပျော့ပျောင်းသည့် ဂါဝန်စအောက်တွင် တင်းရင်းစွာ ရှိနေသည်။“စနိုး…အချိန်ရသေးလား ““ရပါတယ် .. အကို … ဘာဖြစ်လို့လဲ… ““စနိုးအားရင် ကန်ပေါင် သွားထိုင်ရအောင်လားလို့ … ညနေလဲ စောင်းပြီဆိုတော့လေ ..““ထိုင်လေ… အကို“ကောင်မလေးက
မငြင်းသည်မို့ လွမ်းဝေတစ်ယောက် အပျော်ကြီးပင် ပျော်သွားမိသည်။ ဒါဆိုရင်တော့ ရှေ့ ရေးက မဆိုးတော့ချေ။ တကယ်လဲ မဆိုးချေ။ ကားရပ်ပြီးနောက် ကန်ပေါင်ပေါ်သို့ လျှောက်လာရာတွင် စနိုးသည် လှေကားထစ်လေးတွေ တက်ရတာကပဲ မောလို့လား ၊ ဒါမှမဟုတ် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ချွန်ကြောင့်ပဲလား မသိ သူ့လက်ကို ကိုင်တွဲလာသည်။ လွမ်းဝေက စောင်းငဲ့အကြည့်တွင် သူမလေးသည် သူ့ကိုပြန်၍ ပြုံးကြည့်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ မျက်ဝန်းလေးတွေက ရွှန်းလဲ့နေပါလား။လွမ်းဝေသည်
ရာသီဥတုက သူ့ဘက်ပါနေသည်မို့ ထိုင်ခုံတန်းလျားလေးမှာ ထိုင်မိသည်နှင့် ကန်ရေပြင်ကို ငေးမောနေသည့် ကောင်မလေးကို သာသာခေါ်မိသည်။“စနိုး ““အကို “လှပသည့်
မျက်နှာလေးက သူ့ဘက်လှည့်လာသည်။ လွမ်းဝေသည် နေရာရွှေ့လိုက်သည်။ သူတို့နှစ်ဦး၏ ကိုယ်က အတော်နီးစပ်သွားသည်။ စနိုးသည် ကိုယ်ကလေးယို့မသွားချေ။ လွမ်းဝေ၏ မျက်နှာကို ငေးမြဲငေးနေသည်။“စနိုး စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင် .. အကို စကားတစ်ခွန်းပြောချင်တယ် ..“လွမ်းဝေသည်
သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာအတိုင်းပင် စကားကိုခင်းကာပြောလိုက်သည်။ စနိုးသည် ဘာမှတော့ မပြော သူ့မျက်နှာကို ချစ်စဖွယ်ပြုံးကာ ကြည့်နေသည်။“အကိုလေ .. စနိုးကို မေတ္တာရှိနေပြီကွယ် …““အော် …ဒါများ … အကိုရယ် … စနိုးက အကို မပြောခင်ကတည်းက ရိပ်မိနေတာပါ ..““တကယ်….ဒါဆို.. စနိုးမှာ အကို့အတွက် အဖြေရှိနေပြီပေါ့နော် ..“လွမ်းဝေသည်
စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် စနိုး၏ လက်ကလေးကို အမှတ်မထင် ကိုင်မိသည်။ ရွှန်းလဲ့ကြည်လင်နေသည့် သူမ၏ မျက်ဝန်းလေးတွေကိုလဲ ငေးကာ စိုက်ကြည့်မိသည်။ “ပြောစရာ လိုသေးလို့လား …. အကိုရယ် … တခါတလေ ကျတော့ စကားလုံးတွေက မလိုအပ်ပါဘူး ..“ကောင်မလေး၏
မပွင့်တပွင့် အဖြေတွင် လွမ်းဝေသည် မချင့်မရဲဖြစ်ကာ သူမ၏ ကိုယ်ကလေးကို လှမ်းပွေ့မိသည်။ သင်းပျံသော ရနံ့လေးနှင့် အတူ စနိုး၏ ကိုယ်ကလေးက လွမ်းဝေရင်ခွင်ထဲသို့ ပြိုကျလာသည်။ “ချစ်တယ် …စနိုးရယ် … အကို့ရဲ့ နှင်းပွင့်လေး …““အွန့် …“စနိုးခမျာ
စကားပြန်ဖို့ အချိန်ပင် မရလိုက်ပါ။ လွမ်းဝေ၏ လက်တွေက ရင်ခွင်ထဲရောက်နေသည့်
သူမကိုယ်ကလေးကို ခပ်တင်းတင်းလေး ဖြစ်ညှစ်လိုက်သောကြောင့်ပင်။ တင်းတင်းလေးဖြစ်သွားသော ကိုယ်ကလေးကြောင့် ခါးကလေးက ကော့ကာ သူမ မျက်နှာလေးက မော့တက်လာသည်။ လွမ်းဝေသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျက်စိဒေါင့်ကပ်ကာ မြန်မြန် အကဲခတ်လိုက်သည်။ လောလောဆယ်တော့ နောက်ကားရှင်းနေသည်။ မျက်နှာလေးမော့တက်လာသည့် ကောင်မလေး၏ နဖူးလေးကို သူနှုတ်ခမ်းက ထိကပ်သွားသည်။ စနိုးက မရုန်းဖယ်ချေ။ မျက်တောင်လေးတွေတောင် စင်းသွားရှာသည်။ လွမ်းဝေ၏ နှုတ်ခမ်းတွေက ဒီမှာ ရပ်မနေပါ။ နှာတံသွယ်သွယ်လေးတလျှောက် ဆင်းလာရင်း ကောင်မလေး၏ နှုတ်ခမ်းသားချိုချိုလေးများကို ဖိကပ်စုပ်နမ်းမိသည်။ ကျောပြင်လေးကို သိုင်းဖက်ထားသည့် သူ့လက်တွေကလဲ အသာပွတ်သပ်နေရင်း အောက်ကို ဆင်းသွားသည်။ “ပြွတ်….ကိုကိုရယ်…တော်တော့ကွယ်…. လူတွေနဲ့ မကောင်းဘူး …နော်..“လွမ်းဝေ၏
လက်တွေက သူမ၏ တင်ပါးအိအိလေးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရာ စနိုးသည် လွမ်းဝေ၏ ရင်ခွင်ထဲမှ လူးကာထရင်း ပြောသည်။ ဟုတ်တော့ဟုတ်သည်။ သူတို့ကသာ နှစ်ယောက်တည်းကမ္ဘာဆိုပေမယ့် လူတွေက ရှိနေသေးသည်လေ။ ဒါနဲ့ .. စနိုးက သူ့ကို ခေါ်လိုက်တာက။ လွမ်းဝေသည် ခရစ်စမတ်တွင် ချော့ကလက်ထုပ်လက်ဆောင်ရသည့် ကလေးငယ်၏
အပျော်မျက်နှာမျိုးနှင့် စနိုးကို ကြည့်သည်။“စနိုးက ကို့ယ့်ကို .. ကိုကိုလို့ ခေါ်တယ် … “ကောင်မလေးသည် ပါးစပ်ဖြင့် မဖြေ။ ချစ်စဖွယ် ခေါင်းကလေးသာ ညိမ့်ပြသည်။ “ဟေးးးးးးးးးးးး ….“လွမ်းဝေသည်
နေရာမှ ထကာ ကန်ပေါင်ပေါ်တွင် လက်မြှောက်ခြေဆန့်ကာ စိတ်လွတ်လက်လွတ် အော်မိသည်။ သူ့အော်သံကြောင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းက ထီးကလေး တစ်ချောင်းကွယ်ကာ အလုပ်ဖြစ်နေသော အတွဲပင် အလန့်တကြား လှည့်ကြည့်သည်။ အခုမှ လှေကားထစ်ပေါ်က တက်လာသည့် နောက်ထပ် အတွဲတစ်တွဲကလဲ သူ့ကို အထူးအဆန်းသဖွယ် လှမ်းကြည့်သည်။“ဟာ….ကိုကို…ဘာကြောင်တာလဲ ..လူတွေ ကြည့်ကုန်ကျပြီ…““ကြည့်ကြည့်ကွာ… ကိုယ်ပျော်လို့ ကိုယ်အော်တာပဲ… ရှုပ်တယ်ကွာ…လာ…လိုက်ခဲ့….လူတွေ မရှိတဲ့နေရာ သွားမယ်..““အယ်… ကိုကို….အာ..ခက်တော့တာပဲ“စနိုးသည် ကမန်းကတမ်းပင် ထိုင်ခုံလေးပေါ်တင်ထားသည့် ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးကို ဆွဲကာ လွမ်းဝေနောက်သို့ တရောသောပါး လိုက်လာရသည်။
တော်တော်ခက်သည့် ကိုကိုရယ် … သူ့စိတ်ကြီးပဲ … သူများလက်ကိုများ လွှတ်ကို မလွှတ်တော့ဘူး…။ ဒီမှာ ဒေါက်ဖိနပ် စီးထားတာလဲ သတိရဦး .. တကယ်တဲ.. ဟင်း… လွမ်းဝေကတော့
တခြားဟာတွေ သိမနေတော့ပါ။ လက်ထဲတွင်ပါလာသည့် လက်ဖ၀ါးနုနုလေးကို မလွှတ်တမ်းကိုင်ထားရင်း ကားရပ်ထားရာသို့ ဦးတည်သွားတော့သည်။ ချစ်သူလေးရယ်
.. ကိုယ်က မင်းကို ချစ်လွန်းလို့ပါကွယ် .. ချစ်မိတယ်ဆိုမှတော့ …ယုယချင်တာ အဆန်းမှ မဟုတ်တာကွယ် … မင်းလေးကကော .. ကိုယ့်လိုပဲလား … စနိုးရယ် စနိုးရင်ထဲတွင် ဘာတွေဖြစ်နေသည်ကိုတော့ လွမ်းဝေသည် တန်ခိုးရှင် တစ်ယောက်မို့
မသိနိုင်ပါ။ သို့သော် ကောင်မလေးသည် သူ့ကို အမှန်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့တော့ သူယုံကြည်ပါသည်။ လွမ်းဝေဆွဲခေါ်လို့ ပါလာသော သူမလေးသည် လမ်းတလျှောက်ဘာမှ မေးခွန်းမထုတ်သည့် အပြင် အခုလို တိတ်ဆိတ်နေသည့် innလေးတစ်ခု၏ အခန်းထဲကို ရောက်လာသည့်အထိလဲ လွမ်းဝေကို ဘာမှ မတားမြစ်ချေ။ ပြန်မည်ဟုလဲ မဆိုချေ။ နှစ်ဦးသား အဖြူရောင်လွှလွှလေးခင်းကာထားသည့် မွေ့ယာပေါ်တွင် ထိုင်မိကြသည်။ လွမ်းဝေက လက်ကလေးနှစ်ဘက်ကို ပေါင်ကလေးပေါ် ယှက်ကာ တင်ထားသည့် ကောင်မလေးကို သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲပွေ့သည်။“ကိုကိုနော် … သိပ်မကဲနဲ့ … စနိုး ကြောက်တယ် ..““ဘာကြောက်စရာရှိလဲ .. စနိုးရယ် … ကိုကိုက ချစ်လို့ပါ ..“လွမ်းဝေသည်
နူးညံအိထွေးနေသည့် ကိုယ်ကလေးကို သာသာလေးဖက်ထားရာက ကောင်မလေး၏ နီညိုရောင်ဆံပင်လေးတွေကို နမ်းသည်။ သင်းပျံသော ရနံ့လေးက သူ့နှာဝတွင် ပျံ့လွင့်သွားသည်။ ဒီကောင်မလေးသည် တကိုယ်လုံးများမွှေးနေသလားမသိ။ ယုန်ငယ်မလေးလို အနည်းငယ် တုန်ခါနေသည့် ကောင်မလေးကို ဖက်ထားရင်း လွမ်းဝေတစ်ယောက် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပါ။ သူ့လက်တွေက မြွေကြီးတစ်ကောင်နှယ် စနိုး၏ ကိုယ်လုံးအိအိလေးကို တင်းတင်းရစ်ပတ်ထားသလို ကောင်မလေး၏ နှုတ်ခမ်းချိုချိုလေးကိုလဲ သူ့နှုတ်ခမ်းနှင့် ဖိကာ နမ်းရှိုက်မိသည်။“အင့်…..အင့်…..အီး….“နှစ်ဦးသား
အနမ်းတွေက တဖြည်းဖြည်းနှင့် အရှိန်တက်လာသည်။ စနိုး၏ လက်တွေကလဲ လွမ်းဝေ၏ လည်တိုင်ကို သိုင်းယှက်ကာ ရီးလေးခိုထားသည်။ လွမ်းဝေ၏ လက်တွေကမူ ကောင်မလေး၏ ကျောပြင်တလျှောက်ကို ပွတ်သပ်နေသလို ကန်ပေါင်ပေါ်တုန်းက ကိုင်ခွင့်မကြုံလိုက်သည့် တင်သားလုံးလုံးလေးကိုလဲ ဆုပ်နယ်ဆော့ကစားနေသည်။ စနိုးရင်ထဲတွင် မုန်တိုင်းကြသလို လှုပ်ခါနေသလို အလိုလိုနေရင်း ပေါင်ကြားက စောက်ပတ်လေးက ယားယံတက်လာသည်။“အို… ကိုကို…ဘာဖြစ်လို့….ချွတ်ရတာလဲ …. ကိုကိုနော် …မဆိုးနဲ့““စနိုးကလဲ … ကိုကိုက ကြည့်ချင်လို့ပါ…ခုနတုန်းက လူတွေနဲ့မို့လေ … အခုက ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ပဲ ရှိတဲ့ဟာကို“လွမ်းဝေက
နောက်ကျောက ဇစ်ကို ဖွင့်ချရင်း ဂါဝန်လေးကို ဆွဲအချွတ်တွင် စနိုးက ချစ်မျက်စောင်းလေးထိုးကာ တားသည်။ လွမ်းဝေရင်ခွင်ထဲကနေလဲ ရုန်းထွက်ကာ သူမ၏ ရင်ပတ်ကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် ယှက်ကာထားသည်။ လွမ်းဝေက ချော့ကာ သူမ လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကို အသာဆွဲကာ ဖယ်လိုက်၏။ “လှလိုက်တာ …စနိုးရယ်…နာမည်နဲ့ လိုက်အောင်ကို ဖွေးနေတာပဲ“လှလှပပ
ဖွေးဥနေသော ရင်နှစ်မွှာသည် အနီရောင် ဘရာလေးအတွင်းမှ ပြူကာကျနေသည်။ စနိုးသည်
ဒီလိုကျတော့လဲ ဘာမှ မပြောချေ။ လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကို ဘေးချကာ လွမ်းဝေကို ရီဝေေ၀လေးကြည့်ကာ နေသည်။ လွမ်းဝေသည် စနိုး၏ ပုခုံးသားလေး နှစ်ဖက်ကို ကိုင်ကာ ဖွဖွလေး တွန်းကာ လှဲသည်။ ကောင်မလေးသည် မို့ယာပေါ်တွင် ပက်လက်ကလေး ဖြစ်သွားသည်။ လက်ကလေးတွေက သူမ ကိုကို အလိုကျ ဘေးတွင်ကျနေကာ မျက်နှာလေးကတော့ လွမ်းဝေကို တွေတွေလေး ငေးနေသည်။ လွမ်းဝေသည် စနိုး၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်ကာ သူမ၏ ဖြူနုနေသော ရင်ညွှန့်လေးကို နမ်းလိုက်သည်။“ရွှတ်““အို….ကိုကိုရယ်..“လွမ်းဝေ၏ လက်တွေက ဘရာစီယာရင်ပုံလေးကို မကာ အောက်ကနေ ဆွဲလှန်သည်။ ထွက်ပေါ်လာသည့် မို့ဝန်းနေသည့် နို့အုံလေးတစ်ဖက်ကို အသာပါးစပ်နှင့် ဟပ်သည်။“အင့်…..အင့်….ရှီး..“စနိုး၏
လက်တွေက လွမ်းဝေ၏ ခေါင်းကို ဆုပ်ကိုင်မိသည်။ သူမ၏ နို့သီးဖျားလေးပေါ်ကျရောက်လာသည့် လွမ်းဝေ လျှာကြီး၏ အထိအတွေ့တွင် သူမခမျာ မျက်စိလေးတွေ အလိုလို မှေးမှိတ်သွားရသည်။ လွမ်းဝေ၏ လက်တွေက ခါးမရောက်တရောက်ဖြစ်နေသည် ဂါဝန်လေးကို ထပ်၍ ဆွဲကာ ချွတ်သည်။ စနိုးခမျာလဲ နို့အစို့ခံရသည့် အရသာတွင် ဘာလုပ်လို့ လုပ်မိမှန်းတောင် မသိတော့။ လွမ်းဝေ၏ ခေါင်းက ဆံပင်တွေကိုသာ စုပ်ကိုင်ထားမိရင်း ဂါဝန်လေး မရှိတော့သည် အဖြစ်ကိုပင် မရိပ်မိလိုက်ချေ။လွမ်းဝေ၏ လက်က သူမ၏ ပင်တီလေးပေါ်သို့ ရောက်လာမှ သူမသတိထားမိသည်။“ကိုကို…. ဒါတော့ မလုပ်နဲ့ကွယ် … မကောင်းပါဘူး..““ချစ်လို့ပါကွယ် .. စနိုးရယ် …. ကိုကို့ကို ယုံပါ…“စနိုးသည် လွမ်းဝေ၏ မျက်နှာကို ခေါင်းကလေးထောင်ကာ စူးစူးစိုက်စိုက်ပင်ကြည့်သည်။ သူမခမျာလဲ ချီတုံချီကျတော့ ဖြစ်နေဟန်တူသည်။ “ဒါပဲနော်… ကိုကို… စနိုးကို ပြစ်မသွားရဘူး …““မပြစ်သွားပါဘူးကွာ … စိတ်ချ…. ပင်တီ ချွတ်လိုက်မယ်နော် .. စနိုး““အင်း…. ခက်တယ် ..ကိုကိုရယ်“ခက်တယ်လို့သာ
ဆိုသော်လဲ လွမ်းဝေက ပင်တီလေးကို ပေါင်ရင်းတလျှောက် ဆွဲချမှုတွင်တော့ သူမကပင် တင်ပါးလေးကို ကြွကာပေးမိသည်။ လွမ်းဝေသည် ဖောင်းဖောင်းဖွေးဖွေးလေး ဖြစ်နေသည့် စနိုး၏ ရတနာလေးကို မျက်တောင်မခတ်တမ်းပင် ကြည့်မိသည်။ ကောင်မလေးသည် ပင်ကိုယ်ကပဲ အမွှေးနဲသလားတော့ မသိ။ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများပေါ်တွင် အမွှေးအမှင်ကင်းကာ ဆီးစပ်ပိုင်းတွင်သာ အနည်းငယ် ပြောင်းဖူးမွှေးလေးများပမာ ကပ်ကာပေါက်နေသည်။ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများက တင်းတင်းလေးစေ့ကပ်နေသဖြင့် လွမ်းဝေတစ်ယောက် အထဲကိုပင် ကောင်းကောင်းမမြင်ရချေ။လွမ်းဝေသည် သူကိုယ့်ပေါ်က အ၀တ်အစားတွေကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ ကိုယ်ကိုလဲ နေရာရွှေ့ကာ ကောင်မလေးပေါင်ကြားတွင် နေရာယူသည်။ အာဒမ်နှင့် ဧ၀ အစပျိုးခဲ့သည့် အချစ်ပန်းပွင့်ကို သူတို့လဲပဲ စိုက်ပျိုးရန် ပြင်သည်။စနိုးသည် လွမ်းဝေ ပေါင်ကြားက အချောင်းကြီးကို မြင်လိုက်သည်တွင် မျက်လုံးလေး ၀ိုင်းသွားသည်။“ကိုကို..ဖြေးဖြေးနော် … စနိုး ..နာမှာ ကြောက်တယ်…““အင်းပါ… စနိုးရယ် … စနိုး နာရင် ပြန်ထုတ်လိုက်ပါ့မယ် ..“ဒါကတော့
လွမ်းဝေ ကောင်မလေးကို မညာချင်ပဲ ညာလိုက်ရသည်သာ။ ကောင်မလေးရယ် … နောက်ကျရင်
ဘယ်လောက်ကောင်းတယ် ဆိုတာ မင်းသိလာမှာပါ …။ လွမ်းဝေသည် ကောင်မလေး၏ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို တွန်းကာ ကားထုတ်သည်။ အခုကျတော့မှ စောက်ပတ်အကွဲလေးသည် ဟတတဖြစ်သွားသည်။ အောက်ခြေက အပေါက်ဝလေးကို လက်ညှိုးနှင့် လက်မသုံးကာ ဖယ်လိုက်ပြီး သူ့ထိပ်ကြီးနှင့်တေ့သည်။ “အင်း…..အီး….အီး“လွမ်းဝေရော
..စနိုးပါ ကိုယ်ကလေးတွေ တုန်တက်သွားသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်အင်္ဂါများ၏ အဓိကနေရာများ အချင်းချင်းအထိအတွေ့မို့ ကာမလှိုင်းတွေက တကိုယ်လုံးတွင် မဆုံးနိုင်အောင် ရိုက်ခတ်လာတော့သည်။
လွမ်းဝေက အားကလေးနဲနဲ စိုက်၍ ဖိချသည်။ အပေါက်ကလေးက ၀ိုင်းစက်သွားပြီး နီနီရဲရဲထိပ်ဖူးကြီးက ကျွံကျသွားသည်။ စောက်ပတ်ဝလေးနားက အရစ်လေးတွေက လွမ်းဝေ
အတန်ကြီး၏ ထိပ်ပိုင်းကို တင်းကနေအောင် ဆွဲညှစ်သည်။“အီး…..အင့်…ကိုကို…““အီး….စနိုးရယ်“စနိုးခမျာ
မွေ့ယာခင်းကို တင်းတင်းပင် ဆုပ်ကိုင်ထားမိသည်။ လွမ်းဝေသည် ထိပ်ဝလေးနှင့်ပင် တင်းကျပ်နေအောင် ခံစားလိုက်ရသဖြင့် အရမ်းမသွင်းရဲ။ မတော်ကွဲပြဲသွားလျှင် ဒုက္ခမဟုတ်လား။ အသာလေး ပြူတစ်ပြူတစ် ဆော့ကစားပေးသည်။ အနီရောင်ဘရာလေးနှင့် အပြိုင်ဖြစ်နေသော ပတ္တမြားခဲလေးတွေကို လက်ကလေးနှင့် လှမ်းပွတ်ကာ ချေပေးသည်။ စနိုးသည် လွမ်းဝေ၏ သူမနို့သီးလေးတွေကို ဆော့ကစားမှုတွင် အောက်ဘက်က ဝေဒနာကို တဒင်္ဂလောက်တော့ မေ့သွားသည်။ “နဲနဲ ဆက်သွင်းလိုက်မယ်နော် … စနိုး““အင်း..သွင်းလေ…. ကိုကို…တမျိုးကြီးပဲ..“စနိုးသည်
လွမ်းဝေ ဒစ်ကြီး၏ နှိုးဆွမှုတွင် အရည်ကြည်တွေ စိုလာယုံမက ရမက်စိတ်ကြောင့်လဲ ကိုယ်ကလေးက ထွန့်ထွန့်လူးနေသည်။ လွမ်းဝေသည် နဂိုကတည်းက အားမလို အားမရဖြစ်နေလေရာ ကောင်မလေးက ကြည်ဖြူစွာနှင့် အဆိုတွင် သူ့လီးတန်ကြီးကို အားစိုက်ကာ ဖိချသည်။“ဗြစ်….ဘွတ်….ဘွတ်……အီး…..အင့်……နာတယ် …ကိုကို“ဒီတစ်ခါတော့
အတန်ကြီးက တစ်ဝက်လောက် ၀င်သွားသည်မို့ စနိုးခမျာ ကျိတ်မခံနိုင်ပါ။ နှုတ်ကဖွင့်ဟာကာ ညည်းမိသလို အိပ်ယာခင်းကိုလဲ တင်းတင်းလိမ်ကျစ်ကာပင် ဆုပ်ကိုင်မိသည်။ လွမ်းဝေ ဆက်မသွင်းပါ။ သူသွင်းလို့မရအောင် တားထားသည့် အရာကလဲ ရှိနေသည် မို့လား။လွမ်းဝေသည် ကောင်မလေး၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချသည်။ ကျဉ်းကျပ်လှသည့် စောက်ခေါင်းတလျှောက် အကြားအလပ်မရှိအောင် တိုးဝင်နေသည့် အတန်ကြီးကြောင့် အောင့်သက်သက်ဖြစ်နေသည့် ကောင်မလေး၏ ဝေဒနာကို
သူ စာနာမိသည်။ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေကို သူက ကြင်နာစွာပင် နမ်းရှိုက်မိသည်။ လွမ်းဝေ၏ အနမ်းရေယဉ်ကျောတွင် စနိုးသည် ပြန်လည်၍ မျောပါသွားသည်။ ပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်လာသည့် ကိုကို၏လျှာကြီးက သူမ၏ အသည်းနှလုံးတွေသာ မက စောက်ပတ်ထဲက နာကျင်ခံခက်နေမှုကိုပါ နှုတ်ကာ ယူသွားသည်ဟု ထင်ရသည်။ လွမ်းဝေသည် တော်တော်လေးကြာတော့မှ ကောင်မလေး၏ နှုတ်ခမ်းတွေဆီက ရွရွလေးခွာလိုက်သည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကိုယ်ကိုပြန်မတ်ကာ နေရာယူရင်း သူ့လီးတန်ကြီးကို တွန်းကာခံထားသည့် အမြှေးပါးလေးကို ကျော်လွှားဖို့ ပြင်သည်။ သိပ်တော့ မကြိုးစားလိုက်ရပါ။ ကောင်မလေး၏ ခါးကျင်ကျင်လေးကို မိမိရရကိုင်ကာ တွန်း၍ ဖိချလိုက်သည်တွင်တော့ သူ့အတန်ကြီးသည် အထဲကို နောက်နှစ်လက်မလောက် ကျွံကျသွားသည်။“အီး….ကိုကို…. မလုပ်နဲ့တော့….နာတယ် ကိုကိုရဲ့ ..“ဒီတစ်ခါတော့
လွမ်းဝေသည် စနိုး၏ စကားကို ဂရုမစိုက်တော့ပါ။ အပြင်ဘက်တွင်လဲ ဘာမှ သိပ်မကျန်တော့သည်မို့ ခါးကျင်ကျင်လေးကိုသာ မလွှတ်တမ်းကိုင်ထားရင်း နောက်ထပ်ကျန်နေသည့် အပိုင်းကို ဆက်ထိုးသွင်းသည်။“အီး … ဒုတ်….အီး ….နာပါတယ် ဆို … ကိုကို…““ဆော်ရီးကွာ… စနိုးရယ် … ပြီးသွားပါပြီ…. အကုန်ဝင်သွားပြီ…..နော် ….“လွမ်းဝေသည်
အခုတော့မှ မျက်ရည်လေးတွေ ၀ိုင်းနေသည့် ကောင်မလေးကို ချော့မိသည်။ စနိုးသည် လွမ်းဝေ၏ စကားတွင် မယုံနိုးနိုးနှင့် ခေါင်းအုံးလေးကို လက်ကလေးနှင့်ထောက်က သူမ၏ ဆီးစပ်ကို ငုံ့ကြည့်သည်။ ဟုတ်သည်။ သူမတို့ နှစ်ဦး၏ ဆီးစပ်သည်အကြားအလပ်မရှိ။ လွမ်းဝေ၏ လီးမွှေးလိမ်ကောက်ကောက်များနှင့် သူမ၏ အမွှေးလေးတွေပင် လိမ်ယှက်နေကြသည်။“အီး … ကျွတ်…ကျွတ်…နာတော့ နာသေးတယ် ..ကိုကိုရယ် ….တမျိုးကြီးပဲ ….ဘယ်တော့မှာ သက်သာမှာလဲ ကိုကို..““အစကတော့ …ဒီလိုပဲ ..စနိုးရယ်…နောက်ကျရင်သာ …အထာကျသွားမှာ..““အယ် …ဘယ်သူက သူလုပ်တာ နောက်ခံမယ်လို့ ပြောနေလို့လဲ …ဒီလောက် နာတာကို..““ကဲပါ …အကုန်လုံး ၀င်သွားမှတော့ …ဒီထက် ထူးမနေတော့ဘူး….. ကိုကို ဖြေးဖြးချင်း ဆောင့်ပေးမယ် …မှေးသာနေလိုက်..“လွမ်းဝေသည်
ချော့ချော့မော့မော့နှင့် ကောင်မလေးကို ခေါင်းအုံးလေးပေါ် အသာပြန်လှဲချသည်။ စနိုးသည် လွမ်းဝေကို ကြည့်၍သာနေသည်။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကိုကို … သူပြောသလို ..မဟုတ်လို့ကတော့ သိမယ်…။လွမ်းဝေသည် သူ့လီးတန်ကြီးကို ခပ်ဖြေးဖြေးလေး ဆွဲထုတ်သည်။ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကပါ ခပ်တင်းတင်းလေး ကပ်လျက်ပါလာသည်။ “အီး…ကျွတ်…ကျွတ် … ကိုကို ဖြေးဖြေးနော်““အင်းပါ .. စနိုးကလဲ“တကယ်လဲ
လွမ်းဝေသည် ဖြေးဖြေးလေးပင် လှုပ်ရှားပေးပါသည်။ ပြန်နှုတ်လိုက် အသာပြန်သွင်းလိုက်နှင့် သူ့ခမျာ စိတ်ကိုထိန်းကာ ကောင်မလေး ကာမအရသာတွေ့အောင်
ပြုလုပ်ပေးရှာသည်။ လုပ်နေရင်းနှင့်လဲ စနိုး၏ မျက်နှာလှလှလေးကို အကဲခတ်ကာ ကြည့်နေမိသည်။ လေး ငါး ဆယ်ချက်လောက် အပြီးတွင် ရှုံ့ မဲ့နေသော မျက်နှာလေးအစား သူမမျက်နှာလေးက လွမ်းဝေဆောင့်လိုက်တိုင်း နှုတ်ခမ်းထောင့်လေးက မသိမသာ ပြုံးသွားသည်ကို တွေ့ရသည်။ စောက်ပတ်လေးကလဲ စောစောကလောက် အခက်အခဲ မရှိပဲ ချောချောချူချူဖြစ်လာသည်။ မဖြစ်ပဲလဲ ခံနိုင်မလား။ စနိုးခမျာ ဖိုဓါတ်အပြည့်ပါသည့် သန်မာသည့် အချောင်းကြီး၏ ပွတ်ထိုးနေမှုကြောင့် စောက်ရည်တွေက ထွက်ကျနေသည်လေ။ နာကျင်မှုကလဲ ကိုကိုပြောသလို ပြေပျောက်ကာ ထူးဆန်းသည့်အရသာ တစ်မျိုးက သူမ၏ စောက်ပတ်အတွင်းသားတွေက တဆင့် တကိုယ်လုံးကို ပျံ့ နှံ့ကာပင် ရောက်ရှိသွားသည်။
လွမ်းဝေသည် ဒီတော့မှ သူ့အတန်ကြီးကို ဒစ်ကြီးပေါ်လာသည်အထိ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ သူက လီးတန်အ၀င်အထွက်ကို ငုံ့ကြည့်နေသည်မို့ ဒစ်နားတ၀ိုက်တွင် သွေးအနည်းငယ်ပေကျံနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ သြော် .. စနိုးရယ် .. မင်းလေးက ဖြူစင်လွန်းလှတယ်ကွယ် … ကိုယ်သိပ်ချစ်သွားပြီကွာ …။ အပေါက်ဝနားရောက်သွားသည့် အတန်ကြီးက ဒီတစ်ခါတော့ တရှိန်ထိုးပြန်ဝင်လာသည်။ စနိုးခမျာ အင့်ခနဲတောင် ဖြစ်သွားသည်။“ဗြစ် ….ဘွတ် ….ဘွတ် ….အင့်…..အင့်…““ရလား … စနိုး….““အင့်…ရတယ် … ကိုကို…ဆောင့်….ဆောင့်… စနိုး စိတ်တွေ တမျိုးပဲ..“စနိုးမှာ
အခုတော့ နာကျင်မှုတွေအစား ကာမအရသာက အစားထိုးကာ ၀င်ရောက်လာပြီမို့ ရမက်သွေးတွေက ပွက်လာသည်။ တင်ပါးလေးကိုပင် မကော့တတ် ကော့တတ်နှင့် ကော့ပင့်လှုပ်ရှားနေသည်။ မျက်စိအောက်က ကောင်မလေးက တအင့်အင့်နှင့် လူးလွန့်လာမှတော့ လွမ်းဝေလဲ ဘာသားနှင့်လုပ်ထားပေလို့လဲ။ စိတ်ကြိုက်ပင် ကောင်မလေး၏ ခါးကျင်ကျင်လေးကို ပင့်ကိုင်ကာ ဆွဲ၍ ဆောင့်ပြစ်လိုက်သည်။ အချက်တိုင်းက စောက်ပတ်အတွင်းသားတွေကို ပွတ်ထိုးနေသလို စနိုး၏ စောက်ပတ်လေးကလဲ လွမ်းဝေအတန်ကြီးကို တချက်တချက် ဖိညှစ်ပေးသေးသည်။ အ၀င်အထွက်မြန်လာသလို
သူတို့နှစ်ဦး၏ အသက်ရှုသံများကလဲ ပြင်းသထက်ပြင်းလာကြသည်။ နှစ်ဦးသား စကားပင် မဆိုဖြစ်ကြပဲ တူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းဖို့သာ စိတ်ထက်သန်သန်ချီတက်နေကြသည်။ ဆုံမှတ်သည် မဝေးတော့ချေ။ တဘွတ်ဘွတ် တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ဆောင့်လိုးသံတွေ ၊ ဆီးစပ်ချင်း တဖတ်ဖတ် ရိုက်ခတ်သံတွေသာ အခန်းငယ်လေးအတွင်းတွင် ကြီးစိုးနေတော့သည်။နောက်ဆုံးတွင်တော့ လွမ်းဝေအတန်ကြီးက တင်းခနဲဖြစ်သွားကာ အရှိန်ပြင်းပြင်းနှင့် ပြစ်ဆောင့်ချလိုက်ပြီး ချစ်သူလေး၏ စောက်ပတ်နုနုလေးအတွင်းတွင် လရည်များကို ပန်းထည့်မိတော့သည်။ စနိုးကိုယ်တိုင်လဲ တင်ပါးလေးများပင် မွေ့ယာက လွတ်မတတ်ကော့တက်လာပြီး တကိုယ်လုံး ကျင်တက်သွားကာ ကာမပန်းတိုင်ကို ဆိုက်ရောက်သွားသည်။ သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ကျလာသည့် ချစ်သူကိုကို၏ ကျောပြင်ကြီးကို မလွတ်ရအောင် ပွေ့ဖက်ထားရင်း သူမလေးသည် လွမ်းဝေ၏ ပါးပြင်ကို
ခိုးကာနမ်းမိသည်။“ချစ်တယ် ကိုကိုရယ်..““တကယ် …““တကယ်ပေါ့ …. ကိုကို က … စနိုးကို အချစ်တွေ သင်ပေးနေတာကို ..“လွမ်းဝေသည်
အသာအယာပင် ကောင်မလေးကိုယ်ပေါ်က ကြွကာ ဘေးကိုဆင်းသည်။ အခုမှ သတိရကာ ကုတင်ခေါင်းရင်းဘက်တွင်ရှိသော မှန်တင်ခုံလေးပေါ်တွင် တင်ထားမိသည့် တစ်ရှုးလေးတွေကို အမြန်ဆွဲကာ ကောင်မလေး၏ စောက်ပတ်ဝလေးတွင် ကပ်ပေးလိုက်သည်။“အယ်..ဖယ်ပါ.. ကိုကို…စနိုးဖာသာ စနိုးလုပ်ပါ့မယ် ..““ငြိမ်ငြိမ်နေပါ… စနိုးကလဲ … ကိုကို .. က … ကိုယ့်အလိုလိုက်တဲ့ … ကိုယ့်ချစ်သူလေးမို့ လုပ်ပေးတာကို … ““ဟင်း…. အပိုတွေ “စနိုးသည်
ချစ်စဖွယ်မျက်စောင်းလေးထိုး၍သာ နေလိုက်ရသည်။ သူမစောက်ပတ်ကို လက်လှမ်းမည်ကို မလှမ်းတော့ပဲ ကုတင်နောက်ကို မှီ၍သာ လွမ်းဝေလုပ်သမျှ ကြည့်နေရှာသည်။ ဒီလိုကျတော့လဲ သိပ်ယုယတတ်ပါလား .. ကိုကိုရယ်…“စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်နေတယ် ..ကိုကို… နဲနဲလဲ နာတယ်…““အင်း …အစမို့လို့ပါ .. လာထ .. စနိုး…ရေဆေးလိုက်တာ ကောင်းမယ်ထင်တယ်..“လွမ်းဝေနှင့်
စနိုးသည် အတူလက်ချင်းတွဲကာ ရေချိုးခန်းဆီသို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။ နှစ်ဦးသား
ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး နောက်တွင်တော့ အချိန်ကလဲ လင့်နေပြီမို့ inn လေးထဲက ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ စနိုးသည် လမ်းလျှောက်ရင်းနှင့် ပေါင်ကြားက အနည်းငယ် နာနေသလိုဖြစ်လို့ လွမ်းဝေ၏ ပုခုံးကို မှီကာ ထားရသည်။ ဒီတစ်ခါတော့ လွမ်းဝေသည် အလာတုန်းကလို စိတ်လက်မာန်ပါ ချစ်သူလေးကို ဆွဲမခေါ်မိပါ။ ယုယုယယ ဖေးဖေးမမပင် အသာခါးကလေးကို ဖက်ကာ လျှောက်လာမိကြသည်။အိမ်ပြန်လာရာ လမ်းတလျှောက်တွင် လွမ်းဝေနှင့် စနိုးသည် တစ်ယောက်မျက်နှာကို တစ်ယောက်ကြည့်မ၀နိုင်အောင်ပင် ဖြစ်နေသည်။ ကောင်မလေးသည် ကားထွက်လာရင်း နဲနဲကြာတော့ ဖွင့်ထားသည့် ကားပြတင်းပေါက်ကပဲ ဆောင်းလေတွေတိုးလို့လား မသိ ။ နေရာလေးရွှေ့ကာ လွမ်းဝေ၏ ပုခုံးစွန်းလေးကို မှီကာထားသည်။ လွမ်းဝေသည် ရှေ့တူရှုကို ကြည့်ကာ မောင်းနေရင်း တချက်ချက်တွင် ရင်ခွင်ထဲက ကောင်မလေးကို ငုံ့ကြည့်မိသည်။ လမ်းမီးတိုင် တစ်တိုင်ချင်းစီကို သူ့ကားကို ဖြတ်ကျော်သွားတိုင်း ချစ်သူလေး၏ မျက်နှာလှလှလေးသည် ကားရှေ့ခန်းတွင် ၀င်းခနဲ
ဖြစ်သွားသည်ကို သူမြင်ရသည်။ အချစ်ဆိုတာ … ရယူခြင်းလား.. ပိုင်ဆိုင်ခြင်းလား .. ပေးဆပ်ခြင်းလား … သူသေသေချာချာ မစဉ်းစားကြည့်ဘူးပါ။ သူ့အတွက်တော့ ဒီကောင်မလေး စိတ်ချမ်းသာမှုသည် first priority ပင်။ စနိုးနှင့် ရှိနေသည့် အချိန်လေးတွေကို မကုန်ဆုံးခြင် မိသည်ကလဲ သူ့ရင်ထဲက ဆန္ဒအမှန်ပင်။ သူဖတ်ဖူးသည် စာရေးဆရာ တာရာမင်းဝေ၏ ကဗျာလေးတစ်ခုကို သွားသတိရမိသည်…ချစ်သူလက်ကလေး ကိုင်ပြီး …ချစ်သူဘက်က ရင်ဆိုင်ချင်တယ် …ချစ်သူ့အင်အားများစွာနဲ့…ချစ်သူ့သားတော် ဘ၀မှာ ပျော်ပါတယ် …အနက်ရောင်
ကတ္တရာလမ်းမထက်တွင် ကားကလေးသည် တရိပ်ရိပ်နှင့် ပြေးနေသည်။ ဒီဇင်ဘာ၏ အအေးဓါတ်သည် ညပိုင်းရောက်လာသည်မို့ တစစတစစ ပိုအေးလာသည်။ ကားကလေးထဲရှိ လူသားနှစ်ဦးကတော့ အမျိုးအမည်မသိတဲ့ ရင်ထဲက အနွေးဓါတ်ကိုယ်စီနှင့် ပြင်ပအအေးဓါတ်ကို မေ့လျော့နေကြသည်သာ။ နှစ်တစ်ခု၏ နောက်ဆုံးနေ့သည် တကယ်တမ်းကျတော့ သာမန်နေ့တစ်ရက်သာပင် ဖြစ်သည်။ နေလုံးကြီးသည် အရှေ့ဘက်အရပ်က ထွက်၍ ၁၂နာရီ အချိန်တွင်းတွင် အနောက်ဘက် မိုးကောင်းကင်တွင် ၀င်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားမည်သာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားတိုင်း၏ စိတ်ထဲတွင်တော့ အနည်းနှင့်အများ ဒီနေ့ကို ရင်ခုန်စွာနှင့် စောင့်မျှော်နေမိကြသည်သာ။ ဒီထဲတွင် လွမ်းဝေတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးလဲ အပါအ၀င်ပင်။လွမ်းဝေနှင့် စနိုးသည် အတိအလင်း ချစ်သူဖြစ်သွားပြီးနောက် … တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပျောက်မခံနိုင်အောင်ပင် ဖြစ်ကြသည်။ နံနက်မိုးသောက် အလင်းရောက်ပြီဆိုရင် စနိုးကသော်လည်းကောင်း လွမ်းဝေကသော်လည်းကောင်း ဖုန်းဆက်ကာ နှိုးကြသည်။ ဖုန်းပြောဖြစ်ကြတိုင်းလဲ ဒီနေ့ဘာမှာတွေ့ကြမလဲ … ဘယ်သွားကြမလဲ ဆိုတာက နောက်က လိုက်လာစမြဲ။ စနိုးကလဲ သူမအိမ်ကို ဖွင့်ပြောလိုက်သလို လွမ်းဝေကိုယ်တိုင်လဲ ကောင်မလေးကို အိမ်ခေါ်လာကာ အိမ်သားတွေနှင့် မိတ်ဆက်ပေးထားသူမို့ သူတို့နှစ်ဦး အိမ်တွေက တံခါးမရှိ ဓါးမရှိသာ။ ဖြစ်ချင်တော့ နွေနွေနှင့် သူမလေးသည် ခဏတာအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပင် ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်များ သဖွယ် ရင်းနှီးသွားကြသည်။ တစ်ရက်ကဆို စနိုးနှင့် ချိန်း၍တောင် ရှော့ပင်ထွက်လိုက်ကြသေးသည်။ လွမ်းဝေခမျာ အဲဒီတော့မှ ဒုက္ခရောက်တော့သည်။ သူ့ခမျာ ကောင်ကလေးတွေက စနိုးကို ကြည့်လဲ မျက်ထောင့်နီကြီးနှင့် ဖြစ်ရသလို .. ညီမဖြစ်သူကို ကြည့်တော့လဲ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဖြစ်ရသည်။ အံမယ် … ဟို နှစ်ကောင်ကတော့ … သူ့အဖြစ်ကို ကြည့်ကာ ခိ …ခိ….ခိ နှင့်တောင် ရယ်နေသေးသည်။ဒီနေ့လဲ
နေ့လည်ကတည်းက စနိုးက သူ့အိမ်ကိုရောက်နေသည်။ နယူးရီးယားကို အတူတူ countdown
လုပ်ကြရန် သူတို့က စီစဉ်ထားကြသည်။ အစားအသောက်ကတော့ ဟော့ပေါ့နှင့် အကင် လုပ်စားကြမည်ဟု ကြိုသဘောတူထားကြပြီးသား။ မြတ်သူကလဲ ဒီနှစ်တော့ အကိုဖြစ်သူ ပြန်ရောက်လာ၍ မနှစ်ကလို အပြင်ထွက်မလည်ပဲ အိမ်မှာပင် ရင်းနှီးသော သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်ကာ ၀ိုင်းမည်ဟု ခွင့်ပန်ထားသည်။ နောက်ပြီိတော့ သူက အဖျော်ယမကာ ပိုင်းကို တာဝန်ယူထားသည်။ အခုနောက်ပိုင်း ဒီဇင်ဘာကုန်ခါနီးမို့ ညဘက်ညဘက် ရန်ကုန်မြို့တွင် အေးနေလေရာ နဲနဲပါးပါးဆိုရင် လုပ်ပေ့ါဆိုပြီး လွမ်းဝေကော အမေရောပါ ခွင့်ပြုပေးလိုက်သည်။ မြတ်သူ၏ သူငယ်ချင်းတွေက ဆိုးဆိုးသွမ်းသွမ်းတွေ မဟုတ်မှန်းလဲ သူတို့သိနေသည်လေ။မနက်ကပင် ဒေါ်မြင့်မြင့်သူသည် ဈေးကနေ အကင်လုပ်ဖို့ တီလားဗီးယားလေးတွေရော ကြက်တောင်ပံလေးတွေရော အကုန်အစုံဝယ်လာသည်။ အခုကတည်းက လှီးဖြတ် ခုတ်ထစ်ပြီး မီးဖိုချောင်တွင် ရှာလကာရည်နှင့် စိမ်ကာထားကြသည်။ နွေနွေနှင့် စနိုးက ငါးကင်ထဲတွင် ထည့်ရန် အစာပလာတွေကို နုပ်နုပ်စင်းနေသည်။“ကိုကိုရေ … ဟော့ပေါ့ အတွက် … ပစ္စည်းလေးတွေ လိုနေတာ သွားဝယ်မယ်လေ ….“လွမ်းဝေသည်
မီးဖိုခန်းထဲက ခေါ်သံကြောင့် လက်ထဲက ဂျာနယ်ကို ချကာ နောက်ဘေးဘက်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ နေပါဦး …။ မနေ့ကတုန်းကတည်းက သူတို့နှစ်ယောက်ပဲ လိုအပ်တာမှန်သမျှကို ၀ယ်လာခဲ့သေးတာ မဟုတ်လား ။ အခုဘာလိုနေရသေးတာလဲ ….။“ဘာလိုလို့လဲ စနိုး … ပြောလေ ….ကိုကို သွားဝယ်လိုက်မယ် …“မီးဖိုပေါက်ဝက
ဘေဇင်တွင် လက်ဆေးနေသည့် စနိုးကို မြင်သည်နှင့် လွမ်းဝေက မေးသည်။ ကောင်မလေးက သူ့ကို မျက်စိတဖတ် မှိတ်ပြသည်။ “ဟိုက်“ .. ဘာလဲဟ… ။“လာပါ …. စနိုးသိပါတယ် … လိုက်ပို့မှာသာပို့..“သူ့လက်မောင်းကို
ဆွဲကာ မီးဖိုချောင်က ဆွဲထုတ်လာသဖြင့် လွမ်းဝေလဲ အူကြောင်ကြောင်နှင့် ပါလာသည်။ ညီမဖြစ်သူ နွေနွေက ပြုံးစစနှင့် သူတို့ကို လှမ်းကြည့်နေတာကို တွေ့သည်။ ကားထဲရောက်မှ စနိုးက သူ့နားနားကပ်ကာ ပြောလိုက်သည့် စကားကြောင့် သူမျက်နှာက ပြုံးဖြီးဖြီး ဖြစ်သွားသည်။ ငါ့နှယ် တုံးလိုက်တာနော်…။ ဘာမှမမေးတော့ပဲ ကားကိုသာ ခပ်မြန်မြန်မောင်းလာခဲ့သည်။ အလိုက်သိလွန်းတဲ့ … ကောင်မလေးရယ် …။စနိုးနှင့် လွမ်းဝေသည် ဘာတွေဘယ်လောက်တောင် ရှာဝယ်လိုက်ရသလဲတော့ မသိပါ။ ညနေစောင်းမှပင် လွမ်းဝေတို့ အိမ်ကို ပြန်ရောက်ကျသည်။ တကယ်တမ်း ၀ယ်လာတာကျတော့ နံနံပင်လေး တစ်အုပ်နှင့် သခွားသီးသေးသေးလေးတွေသာ။ စိုက်ခင်းထိတောင် သွားနှုတ်ရလို့လား မသိ။ နှစ်ဦးသား အနည်းငယ်တောင် နှုံးနေသေးသည်။ အိမ်ပေါက်ဝရောက်တော့ ညီဖြစ်သူ မြတ်သူ၏ သူငယ်ချင်းတွေတောင် ရောက်နေကြပြီ။ စနိုးကတော့ ခနသာမျှ နှုတ်ဆက်ပြီး ရေချိုးချင်တယ်ဆိုကာ နွေနွေနှင့်အတူ နောက်ဖေး ၀င်သွားသည်။ မြတ်သူက စနိုးဝင်သွားမှ လွမ်းဝေနားကပ်လာပြီး “ကိုကြီး .. သခွားသီးက ကောင်းလား … ရှောက်ချိုသီးက ကောင်းလား..“ ဟု လာနောက်သဖြင့် လွမ်းဝေ ခြေထောက်နှင့် လှမ်းကန်မိသေးသည်။ ဟိုကောင်က သူ့အကိုအကြောင်း သိနေလို့ထင်သည်။ “တ ဟား ဟား“ နှင့် ရယ်ကာ ရှောင်ထွက်သွားသည်။ည ၇ နာရီ ထိုးတော့ သူတို့၏ အစီအစဉ်ကို အစပျိုးသည်။ အိမ်ရှေ့က ကွက်လပ်ကလေးတွင် အိမ်ပေါ်က ဆက်တီခုံတွေ ဆွဲချလာကာ ၀ိုင်းကလေးဖွဲ့ကြသည်။ မြတ်သူက ဂစ်တာဆွဲထုတ်လာသည်။ လွမ်းဝေလက်ကို ထိုးပေးရင်း ..“ကိုကြီး …လုပ်ဗျာ … ကိုကြီး အသံကို မကြားတာ ကြာပြီ …“လွမ်းဝေလဲ
ဂစ်တာကို လှမ်းယူလိုက်ရင်း မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် နွေနွေနှင့် အတူ ထိုင်နေသည့် စနိုးကို ကြည့်သည်။ စနိုးက သူ့ကို တကယ်လားဆိုသည့် အကြည့်နှင့် မျက်ခုံးလေးတွန့်ကာ ပြန်ကြည့်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကောင်မလေးရယ် .. ဒီညတော့ မင်းအတွက် ကိုယ်ဆိုဖြစ်မှာပါ …။လွမ်းဝေသည် အသာအယာပင် ဂစ်တာကို တစ်ကြိုးချင်း ညှိသည်။ ညီဖြစ်သူ မြတ်သူ၏ အပေါင်းအဖော်တွေထဲက တစ်ယောက်က သူတို့သယ်လာသည် ဂစ်တာကို ထုတ်ကာ လွမ်းဝေ အနား လာထိုင်သည်။ လွမ်းဝေသည် သူ့ကို သိသည်။ မန္တလေးသား ကောင်းမြတ် ဆိုသည့် တရုတ်ကလေး ။ ညီဖြစ်သူနှင့် အမြဲတွဲနေကျမို့  သူက ခင်နေသည်သာ။ မျက်စပြစ်လိုက်ရင်း… အငဲသီချင်း ရလားဟု တိုးတိုးလေး မေးလိုက်သည်။ ကောင်းမြတ်က ခေါင်းညိတ်ပြသည်။ ဟော်လို ဂစ်တာသံက အနဲငယ် အေးလာသည့် ဆောင်းညတွင် သာသာလေး ပေါ်ထွက်လာသည်။“မျက်ဝန်းများနဲ့
သူရယ်ကိုယ်ဆုံတွေ့တဲ့ခဏ မျက်ဝန်းများထဲအချစ်ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြ လောကကြီးနဲ့ အဆက်ဖြတ်ကာ လေဟာနယ်ထဲ မိုးသားများအဖြစ် တို့နှစ်ဦးမျောလွင့်သွားကြ …….“
စနိုးသည် လွမ်းဝေကို ရီဝေေ၀ ပြုံးရင်းသာ ကြည့်နေသည်။ ကိုကိုရယ် … ကိုကို က ဒါမျိုးတွေလဲ ရတယ်ပဲလား ကွယ် …အချိန်ဆိုသော
လက်တံသည် တရွေ့ရွေ့ ရွေ့လျားနေသည်။ ညနက်ပိုင်းရောက်လာသဖြင့် အအေးဒဏ်က အနည်းငယ်တိုးလာသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လဲ မြူမှုန်မှုန်လို နှင်းမှုန်လေးတွေက မှုန်ဝါးဝါး ကျလာသည်။ ဒီဇင်ဘာ၏ နောက်ဆုံး အချိန်သည် တဖြေးဖြေးနှင့် နီးကပ်လာသည်။လွမ်းဝေတို့သည် တိုင်ပင်ထားသလိုပင် စားပွဲပေါ်က နာရီလေးကို လှမ်းကြည့်ကြသည်။ စက္ကန့်တံသည် နာရီညာဘက်ဒေါင့်က ဆယ့်တစ်ဂဏန်းကို ရောက်လာချေပြီ …။“5 …4….3 …..2 ……1 ….““Happy New Yearrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr………ဟေးးးးးးးးးးးးးးး“လွမ်းဝေတို့သည်
နေရာမှထကာ ပြိုင်တူ အော်ဟစ်မိကြသည်။ စနိုးသည် နွေနွေနှင့် အတူ ရှိနေရာမှ ပြုံးပျော်စွာနှင့် လွမ်းဝေ အနားသို့ လျှောက်လာသည်။ ဆန့်တန်းထားသည့် လက်နှစ်ဖက်သည် လေထဲမှာပင် ဆုပ်ကိုင်မိကြသည်။ အပြင်ဘက်တွင် နှင်းမြူတွေကြောင့် အေးနေသော်လဲ စနိုး၏ လက်ကလေးကမူ သာသာလေး နွေးနေသည်။ ထူးဆန်းသည်က ဒီအနွေးဓါတ်လေးသည် သူမ၏ လက်ဖ၀ါးလေးကနေ လွမ်းဝေ၏ နှလုံးအိမ်ထဲထိ
ပျံနှံ့သွားသည်။ စနိုးရယ် … မင်းလက်ကလေးကသာ ဒီလို အနွေးဓါတ်တွေကို
ပေးနိုင်တယ် ဆိုရင်.. ကိုယ့်ဘ၀ တလျှောက်လုံးမှာ မလွှတ်တမ်း ဆုပ်ကိုင်ထားမိမှာပါ … ။ ကောင်မလေးရယ်… ကိုယ့်ရဲ့ ရင်ခွင်ကဗည်းကျောက်စာတိုင်မှာ မင်းရဲ့ နာမည်လေးက စွဲစွဲထင်ထင် စိုက်ထူးထားနေပါပြီကွာ…..။လွမ်းဝေသည် ကံကြမ္မာက ဖန်လာလို့ အမှတ်မထင်
ဆုံစည်းမိသည့် ချစ်သူလေး၏ မျက်နှာကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ငေးကြည့်ရင်း … Let
it snow, let it snow, let it snow ဆိုသည့် သံဇဉ်လေးကို သာသာလေး လေချွန်နေမိတော့သည်။ ဒီလို နှင်းမျိုးသာ ကျမယ်ဆိုရင်တော့ သူ ဆောင်းရာသီကို အေးတယ်လို့ ထင်မိမယ် မထင်ချေ ….။